စွဲလမ်းမှုအတွက် ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက်အခန်းကဏ္) (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အာရုံခံဆဲလျ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC စက်တင်ဘာ 22, 2009 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
အာရုံခံဆဲလျ။ ဇူလိုင် 10, 2008; 59 (1): 11-34 ။
Doi: 10.1016 / j.neuron.2008.06.012
မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများရှာယူမလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပြီးဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖျန်ဖြေကြောင့်ဦးနှောက်ဒေသ dysregulation ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ activation အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တယားမှတဆင့်ရှာဖွေလျက်မူးယစ်မောင်းနှင်ကြောင်းမှီခိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှသော့ချက်ဖြစ်တွေးဆသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပု neuropharmacological function ကိုအပေါ်အလေးပေးအတူမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ (corticotropin-releasing အချက်, norepinephrine, orexin [hypocretin] vasopressin, dynorphin) နှင့်ဦးနှောက် antistress စနစ်များ ([FQ orphanin] neuropeptide Y ကို, nociceptin) ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက် extrahypothalamic စနစ်များ။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုနှင့် antistress စနစ်များမှအကူးအပြောင်းနှင့်တစ်ချိန်ကအစပျိုးမူးယစ်ဆေးမှီခို၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုနှင့် antistress စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်းအခြေခံဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှု circuitry ၏အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ function ကိုသို့စွဲနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကုသနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများအတွက်ဝတ္ထုပစ်မှတ်ပေးပါသည်။
1 ။ မူးယစ်ဆေးဝါး, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု: နိဒါန်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်
1.2 ။ စွဲလမ်းမှု၏ Dynamics ကို
မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ စွဲသုံးအဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်: အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်, မူးရူး / မူးယစ်နှင့် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်, အရာ Impulse အတွက်မကြာခဏအစောပိုင်းအဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်များနှင့် compulsive terminal ကိုအဆင့်ဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ compulsive မှ Impulse ထံမှတစ်ဦးချင်းရွေ့လျားအဖြစ်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီ (ထိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကားမောင်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်အပြုအမူကားမောင်းအပြုသဘောအားကောင်းရာမှဖြစ်ပေါ်Koob, 2004) ။ ဤသုံးပါးအဆင့် (အခြားတဦးတည်းထဲသို့အစာကျွေးပိုပြီးပြင်းထန်ဖြစ်လာ, နောက်ဆုံးမှာစွဲအဖြစ်လူသိများသည့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်မှဦးဆောင်အဖြစ် conceptualized နေကြတယ်Koob နှင့် Le Moal, 1997) ။ အဆိုပါ အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် အဆိုပါစွဲသံသရာ၏ (တဏှာ) ဇာတ်စင်ရှည်လျားလူသားတွေအတွက် relapse ၏အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်တွေးဆခြင်းနှင့်နာတာရှည် relapsing ရောဂါ (အဖြစ်စွဲသတ်မှတ်ပါတယ်ထားပြီးဇယား 1 နှင့် and22).
အဆိုပါစွဲ Cycle ၏အဆင့်ဆင့်
ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးထိုး, အသုံးပြုခြင်း၏အရှည်နှင့်ပင်ယဉ်ကျေးမှုအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. အဆိုပါစွဲသံသရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းစွဲလမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများထုတ်လုပ်ပေးသည်။ စွဲလမ်း၏ opioids နှင့်တကွ, ဂန္မူးယစ်ဆေးဝါး, ပြင်းထန်သောမူးယစ်, သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှုများနှင့်လေးနက် dysphoria, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေခြင်း, abstinence စဉ်အတွင်း somatic နှင့်စိတ်ခံစားမှုဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များပါဝင်သည် compulsive သွေးကြောသွင်းသို့မဟုတ်သောက်သည်မူးယစ်ဆေးယူပြီးအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတစ်ပုံစံ။ တစ်ဦးကပုံစံမူးယစ်ဆေး abstinence ကာလအတွင်းကြုံတွေ့ဟာပြင်းထန် dysphoria နှင့်အီရှောင်ရှားရန်ရရှိသောရမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အရက်စွဲသို့မဟုတ်အရက်အလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါသည်, သို့သော်မကြာခဏယူပြီးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပုံစံမိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်၏နေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်ကြာရှည်ရက်ပေါင်းဖြစ်နိုငျသောအရက်စားသုံးမှု၏ Bing အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်တစ်ဦးပြင်းထန် somatic နှင့်စိတ်ခံစားမှုဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ နီကိုတင်းစွဲလမ်း၏နည်းနည်းသိသာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူအထက်ပါပုံစံများနှင့်အတူခြားနား မူးရူး / မူးယစ် ဇာတ်စင်နှင့်အိပ်ပျော်ရာကာလများနှင့် dysphoria, ယားယံခြင်း, နှင့်ပြင်းထန်သောတဏှာအပါအဝင် abstinence စဉ်အတွင်းအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ, စဉ်အတွင်း မှလွဲ. မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွန်အမင်း titrated စားသုံးမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစားသုံးမှု၏ပုံစံရှိပါတယ်။ ဆေးခြောက်စွဲသိသိသာသာမူးယစ်ဇာတ်စင်အတူ opioids နှင့်ဆေးရွက်ကြီးဆင်တူတဲ့ပုံစံအောက်ပါအတိုင်းပေမယ့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်အဖြစ်, ဘာသာရပ်များတစ် dysphoria ပါဝငျသောဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှိုးနာရီအတွင်းနာတာရှည်မူးယစ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအသုံးပြုမှုပုံစံ, ယားယံခြင်း, နှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုပြသရန်စတင် နှောင့်အယှက်။ Psychostimulant စွဲ (ကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်း) တစ်ဦးအဓိကနှင့်အတူတစ်ဦးပုံစံကိုပြသ မူးရူး / မူးယစ် ဇာတ်စင်။ ထိုသို့သော Bing ကြာချိန်အတွက်နာရီသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းနိုင်ပါတယ်နှင့်မကြာခဏအစွန်းရောက် dysphoria နှင့်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဆုတ်ခွာ ( "ပျက်ကျမှု") အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။ အားလုံးမူးယစ်ဆေးများအတွက်ပြင်းထန်သောတဏှာဆုတ်ခွာ (ဆိုလိုသည်မှာ opioids နှင့်အတူအရက်, နီကိုတင်း) မျှော်လင့်သို့မဟုတ်မကြာခဏတဏှာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရရှိနိုင်မှုအရိပ်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆက်စပ်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်မောင်းနှင်သည့်အခါစူးရှဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေး, opioids, အရက်, နီကိုတင်းနှင့်Δအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်စွဲလမ်း၏ရောဂါလက္ခဏာများတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ9-tetrahydrocannabinol အဆိုပါစွဲသံသရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှသက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် (Shippenberg နှင့် Koob, 2002()စားပွဲတင် 2) ။ အဆိုပါအဘို့အတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ မူးရူး / မူးယစ် အဆိုပါစွဲသံသရာ၏စင်မြင့် (ထိုကဲ့သို့သောအပျြောအပါးအဖြစ်, ဆုလာဘ်အချို့အပိုဆောင်းစိတ်ခံစားမှုတန်ဖိုးကိုနှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောစစ်ကူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်အတွက်စူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်, တိုင်းတာခြင်းအဖြစ် conceptualized နိုင်ပါသည်စားပွဲတင် 1) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်များ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာအတည်ပြုဖြစ်ကြပြီးသွေးကြောသွင်းမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးများနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးလျော့နည်းသွားပါဝင်သည်။ ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင်မိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာတစ်ခုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုကနေအလိုအလျောက်ငွေထုတ်, ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုး, နှင့် (ရှာကြံမူးယစ်ဆေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးဖို့ (အစား preference ကိုထက်) အေးစက်သောအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါဝင်သည်စားပွဲတင် 2) ။ ကြွက်မူးယစ်ဆေးရရှိရန်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အလုပ်အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထပ်တိုးခွင့်နှင့်၎င်းမှီခိုပြည်နယ်ကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းသွေးကြောသွင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထိုသို့သောတိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, ဘိန်းဖြူနှင့်အရက်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Ahmed က et al ။ , 2000; Ahmed ကနှင့် Koob, 1998; Kitamura et al ။ , 2006; O'Dell နှင့် Koob, 2007; ရောဘတ် et al ။ , 2000) ။ ဤပုံစံအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်စွဲအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ၏အကဲဖြတ်ဘို့ကအဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တဏှာ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် ဇာတ်စင်) (မူးယစ်ဆေးသူတို့ကိုယ်သူတို့ မှစ. , မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုအသုံးပြုပုံနှင့်ထိတွေ့မှုကနေဖိအားကိုအောက်ပါသုဉ်းရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ reinstatement ပါဝင်ပတ်သက်နေShaham et al ။ , 2003()စားပွဲတင် 1) ။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် reinstatement ပထမဦးဆုံးထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ Prime ဆေးထိုးသုဉ်းကပါဝင်ပတ်သက်သည်။ တုံ့ပြန် reinitiate ဒါမှမဟုတ်ယခင်ကငွိမျးလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်၏ပမာဏမှ latency မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုရောင်ပြန်ဟပ်မှတွေးဆနေကြပါတယ်။ အလားတူပင်မူးယစ်ဆေး-တွဲသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ (cue-သွေးဆောင် reinstatement) reinitiate နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement မူးယစ်ဆေးထံမှငွိမျးပြီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ reinitiate ကြောင်းစူးရှသောဖိအားများ၏လျှောက်လွှာပါဝငျသညျ။ ဤရွေ့ကားဖိအားထိုကဲ့သို့သော footshock အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား, ထိုကဲ့သို့သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော yohimbine အဖြစ် pharmacological ဖိအား (ပါဝင်နိုင်ပါသည်Shaham et al ။ , 2003) ။ စူးရှသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အခြေခံနှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Response ကျော်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် elevations သော (ဥပမာ, နာတာရှည်အီသနောထံမှ postwithdrawal 2-8 ရက်သတ္တပတ်) ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ရှည်လျား abstinence မှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စူးရှဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဆက်လက်ပြသခဲ့ကြကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံများနှင့်တိုးဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးရှာခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောပြည်နယ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement သည့်အတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်များတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည် အဆက်မပြတ်-မျှော်လင့် အဆိုပါစွဲသံသရာ၏ (တဏှာ) စင်မြင့် (စားပွဲတင် 2).
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏စာတမ်းဟာစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကဒြပ်စင်ထဲမှာအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ရှာကြံဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးများအတွက်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်လာသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ရန်ဦးနှောက် antistress စနစ်များ dysregulation အတူလေးနက်အပြန်အလှန်ကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် နှင့် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် အဆိုပါစွဲသံသရာ၏ (တဏှာ) အဆင့်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုရှည်လျားဖိအားပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, ဤပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှု (စွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေHimmelsbach, 1941) ။ ဟော်မုန်းဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက်ကဖိစီးမှု neurocircuits သာ၏သော့ချက်ဒြပ်စင်၏ Delineation စွဲ၏ pathophysiology သို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချပြီ။
1.3 ။ လှုံ့ဆျောမှု, ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု
လှုံ့ဆျောမှု (ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲမှဆက်ဆံရေးအတွက်အပြုအမူလမ်းညွှန်တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်Hebb, 1949) နှင့်ရှယ်ယာ arousal ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေနဲ့သော့ချက်ဘုံဝိသေသလက္ခဏာများ (Pfaff, 2006) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များပြင်ပ milieu (မက်လုံး) သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေး milieu (ဗဟိုရည်ရွယ်ချက်ကပြည်နယ်များသို့မဟုတ် drives တွေကို) မှနှစ်ဦးစလုံးစွမ်းအင်ရဖို့။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, လှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များစဉ်ဆက်မပြတ်မပေးဖြစ်ကြပြီးကွဲပြားအချိန်ကျော်ပေမယ့်တာရှည် homeostatic သတ်ရှိသည်ဖို့တွေးဆခဲ့ကြသည်။ ယာယီဒိုင်းနမစ်၏အခြေအနေတွင်, ရှောလမုန်နှင့် Corbit inextricably (လှုံ့ဆျောမှု၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီအားဖြင့်စွဲလမ်းအတွက် hedonic ထိခိုက်စေ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်အတူလှုံ့ဆျောမှု၏အယူအဆနှင့်ဆက်စပ်ရှောလမုန်နှင့် Corbit, 1974()စားပွဲတင် 1).
မကြာသေးမီကပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ (ကဇီဝကမ္မရှုထောင့်ကနေမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurocircuitry နှင့် neurobiology ၏ domains များသို့တိုးချဲ့ထားပြီးKoob နှင့် Le Moal, 2008) ။ ဆုလာဘ် function ကို၏ပုံမှန် homeostatic န့်အသတ်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ် Counteradaptive ဖြစ်စဉ်များပုံမှန် homeostatic အကွာအဝေးမှပြန်လာဤသို့စွဲလမ်းထဲမှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကိုလိုငွေပြမှုထုတ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်မှတွေးဆနေကြပါတယ်။ အတွင်း-system ကို neuroadaptations နှင့်အကြား-system ကို neuroadaptations (: ဤ counteradaptive ဖြစ်စဉ်များနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့တွေးဆခဲ့ကြKoob နှင့် Bloom, 1988()စားပွဲတင် 1).
ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, အကြား-system ကို neuroadaptations အဖြစ် activated အဆိုပါစနစ်များကိုဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်ဦးနှောက် antistress စနစ်များပါဝင်မှတွေးဆနေကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်စ antireward homeostatic ယန္တရား (အဖြစ် conceptualized နိုင်ပါသည်Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ ဒီမူဘောင်များတွင်စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, တိုး progressively ကြောင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် / antireward ယန္တရားများ၏ dysregulation တွေအကြောင်းတစ်သံသရာအဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစွဲ၏ compulsive များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက်အကောင့်ဖို့ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် neuroadaptational အပြောင်းအလဲများနှင့် antistress စနစ်များကိုစူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
1.4 Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်း
အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယက, pituitary gland ၏ anterior ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, နှင့်သုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက် adrenal gland (တွေ့: အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသုံးခုကိုအဓိကအဆောက်အဦများအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် Turnbull နှင့် Rivier, 1997) ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ medial parvocellular subdivision အတွက် Neurosecretory အာရုံခံအဆိုပါ anterior pituitary gland ရိုက်ထည့်သောပေါ်တယ်သွေးကြောထဲသို့ CRF synthesize နှင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အဆိုပါ CRF မှ CRF ၏ binding1 pituitary corticotropes အပေါ်အဲဒီ receptor ဟာစနစ်တကျလည်ပတ်သို့ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ ACTH, အလှည့်၌, adrenal cortex ကနေ glucocorticoid ပေါင်းစပ်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ parvocellular အာရုံခံကနေဖြန့်ချိ Vasopressin V ကို vasopressin ကကမကထပြုခဲ့ကြသည် ACTH လွှတ်ပေးရေးအပေါ်များ၏ညှိနှိုင်းသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်1b receptors ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယနှင့် hippocampus: အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးထိပ်ပိုင်း glucocorticoid အဲဒီ receptor အပေါ်ပြုမူကြောင်း glucorticoids ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကနေအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်နှစ်ခုအဓိကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်နျူကလိယနှင့်မှတ်တမ်းယန္တရားများမှတဆင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ cytosolic ပရိုတိန်းမှတဆင့်ဖမ်းယူနားဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ hypophysiotropic အာရုံခံ brainstem အခြား hypothalamic အရေးပါနှင့် forebrain limbic အဆောက်အဦထဲကနေအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ afferent စီမံချက်များကြောင့် innervated နေကြသည်။
1.5 ။ တိုးချဲ့ Amygdala: စိတ်ဖိစီးမှု၏ Interface နှင့်စွဲမှု
နယူး functional ဖြစ်စေလေ့လာတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအများအပြားများအတွက် neuroanatomical အလွှာဟာ Basal forebrain အတွင်းသီးခြားခွဲထွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောတစ်ဘုံအာရုံကြော circuitry ပါဝင်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆများအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များပေးခဲ့ကြ, (က "တိုးချဲ့ amygdala" ဟုချေါKoob နှင့် Le Moal, 2001) ။ (ထို stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, ဗဟို medial amygdala တို့နှင့် medial နျူကလိယ accumbens (ဆိုလိုသည်မှာ posterior shell ကို) ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်: အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အများအပြား Basal forebrain အဆောက်အဦများ၏ရေးစပ်သော macrostructure ကိုယ်စားပြုတယ်Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အဦများ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, immunohistochemistry နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်တူညီရှိသည်, သူတို့ limbic cortical, hippocampus, basolateral amygdala, midbrain နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထံမှ afferent ဆက်သွယ်မှုလက်ခံရရှိသည်။ ဤရှုပ်ထွေးထံမှ efferent ဆက်သွယ်မှုပု posterior medial (sublenticular) ventral pallidum, ventral tegmental ဧရိယာ, အမျိုးမျိုးသော brainstem စီမံချက်များနှင့်ဖြစ်ကောင်းအမြင်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့ point ကနေအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (ရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ projection ပါဝင်သည်Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ၏ Key ကိုဒြပ်စင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ် neurotransmitters ဒါပေမယ့်လည်းမှီခို၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်နှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို (သာပါဝင်သည်Koob နှင့် Le Moal, 2005) ။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်တိကျတဲ့ neuropharmacological ယန္တရားများနှင့်တိုးချဲ့ amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအောက်ကကဏ္ဍများအတွက်စူးစမ်းပါလိမ့်မည်။
2 ။ ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်စွဲမှု: Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor, Norepinephrine, Orexin, Vasopressin, Dynorphin
2.1 ။ Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor
Corticotropin-releasing အချက်တစ် 41 အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်း polypeptide, စာနာနှင့်ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သိသိသာသာ CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆိုပါ neocortex, တိုးချဲ့ amygdala, medial septum, hypothalamus, thalamus, cerebellum နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ midbrain အတွက်ပစ္စုပ္ပန်သည်နှင့်သမင်ဒရယ်-ဦးနှောက်အရေးပါ (Swanson et al ။ , 1983()ပုံ 1) ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor CRF နှင့် urocortin 1 ၏ဖြန့်ဝေနှင့်အတူသိသိသာသာထပ်နေသည်သောဦးနှောက်ထဲမှာအပေါများ, ကျယ်ပြန့်စကားရပ်ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ homology နှင့်အတူအခြားအ peptides ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, အထူးသ urocortin မိသားစု (urocortins 1, -2 နှင့် -3), (စိတ်ဖိစီးမှအမူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအတွက် CRF စနစ်များများအတွက်ကျယ်ပြန့် neurotransmitter အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားပါတယ်ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004) () အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါနောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ။ Urocortin 1 CRF မှနှစ်ဦးစလုံးချည်နှောင်1 နှင့် CRF2 receptors နှင့် CRF ထက်ကွဲပြားခြားနားသော neuroanatomical ဖြန့်ဖြူးပါတယ်။ အမျိုးအစား2urocortins, urocortin2(Reyes et al ။ , 2001) နှင့် urocortin3(Lewis က et al ။ , 2001), endogenous ရွေးချယ် CRF သူတို့ရဲ့ neuroanatomical, neuropharmacological နှင့်ဖြန့်ဖြူး profile များကိုများတွင် urocortin 1 နှင့် CRF ကှာခွားနှင့်များမှာ2 agonists ။
ပြည်တွင်းနှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ-Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor ၏စီမံကိန်း
အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် CRF (စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ pituitary adrenal တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားTurnbull နှင့် Rivier, 1997) ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးထဲမှာတိုးတက်ရေးပါတီအပြောင်းအလဲများကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးမှစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးကနေအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်အလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေး acute အုပ်ချုပ်ရေးကို (HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးဦးနှောက်စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလွယ်ကူချောမွေ့မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ဆေးရှာကြံအပြုအမူများဝယ်ယူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါPiazza et al ။ , 1993; Goeders, 1997; Piazza နှင့် Le Moal, 1997; Fahlke et al ။ , 1996) ။ ကိုကင်း, opiates, နီကိုတင်းနှင့်အရက်၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဤစူးရှသောအပြောင်းအလဲ (ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသို့မဟုတ် dysregulated နေကြတယ်Kreek နှင့် Koob, 1998; Rasmussen et al ။ , 2000; Goeders, 2002; Koob နှင့် Kreek, 2007; Sharp ကနှင့် Matta, 1993; Semba et al ။ , 2004) ။ အစောပိုင်းအယူအဆဖိအား atypical Response opioid မှီခို၏သံသရာဖို့ဇွဲနှင့် relapse ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်း, အနောက်ပိုင်းတွင်ဒီအယူအဆ (အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုးချဲ့ခဲ့သည်Kreek နှင့် Koob, 1998).
အရေးကြီးတာကလက်ရှိစာတမ်းအဘို့အမြင့်မား glucocorticoids ၏အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက် HPA ဝင်ရိုးပိတ်ထားပြန်အစာကျွေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသော basolateral amygdala အတွက် amygdala နှင့် norepinephrine စနစ်များ၏အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွက် CRF စနစ်များ "sensitize" နိုငျ ဖိအား (ရန်Imaki et al ။ , 1991; Makino et al ။ , 1994; Swanson နှင့် Simmons, 1989; Schulkin et al ။ , 1994; Shepard et al ။ , 2000) ။ ထို့ကြောင့် HPA ဝင်ရိုး၏ activation ကနဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်စခွေငျးငှါအနေဖြင့် မူးရူး / မူးယစ် စွဲလမ်း၏စင်မြင့်သည် HPA activation ကိုလည်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် extrahypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနောက်ဆက်တွဲ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် စွဲလမ်း၏စင်မြင့် (Kreek နှင့် Koob, 1998; Koob နှင့် Le Moal, 2005; Koob နှင့် Kreek, 2007()ပုံ 2).
အဆိုပါ Amygdala အတွက် CRF Levels အပေါ်မူးယစ်ဆေး Withdrawal ၏ဆိုးကျိုးများ
သိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားယခုဦးနှောက် extrahypothalamic CRF စနစ်များကိုအရက်အပေါ်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, ဤ activation စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိပါတယ်။ အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRF လွှတ်ပေးရန်မှီခိုကြွက်များ၏ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ (များ၏အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွင်းတိုးပွါးfunk et al ။ , 2006; Merlo-Pich et al ။ , 1995; သံလွင် et al ။ , 2002()ကိန်းဂဏန်းများ 1B နှင့် and2), 2), နှင့်ဦးနှောက် CRF စနစ်များသည်ဤ dysregulation အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများနှင့်မြှင့်တင်ရန်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံမှတွေးဆသည်။ ဒီအယူအဆ, စနစ်တကျ CRF supporting1 ရန် (Overstreet et al ။ , 2004) သို့မဟုတ်မျိုးကွဲ nonselective CRF အဲဒီ receptor ရန်α-helical CRF9-41 နဲ့ D-ဖီ CRF12-41 (intracerebroventricularly ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာBaldwin et al ။ , 1991) သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ (Rassnick et al ။ , 1993) လျှော့ချအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ။
စူးရှသောဆုတ်ခွာစဉ်နှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence (2 ရက်သတ္တပတ် postacute ရုပ်သိမ်းရေး) စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံး, ကြွက်များတွင်မှီခိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှုသွေးဆောင်နာတာရှည်အီသနောငွေ့၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာမှထိတွေ့မှု (O'Dell et al ။ , 2004; Rimondini et al ။ , 2002) ။ တစ်ဦး CRF ၏ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ Intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တိုက်ရိုက် intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 peptide ရန်ရွေးချယ် (စူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့Valdez et al ။ , 2004) ။ သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူး CRF ၏စနစ်ထိုး1 ရန်လည်းစူးရှသောအီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှုပိတ်ဆို့ (Knapp et al ။ , 2004; funk et al ။ , 2007; ရစ်ချတ်ဆန် et al ။ , 2008()ပုံ 3) ။ တစ်ဦးက CRF2 အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ထိုးသွင်း agonist CRF များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းစူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးလျှော့ချအတွက်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့2 CRF ၏ရန်ဆန့်ကျင်ဘက် receptors1 မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနောစားသုံးမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် receptors (funk နဲ့ Koob, 2007) ။ intracerebroventricularly သို့မဟုတ်စနစ်တကျထိုးသွင်း CRF ရန်လည်း (အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားဖို့ potentiated စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့Breese et al ။ , 2005; Valdez et al ။ , 2003) နှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Valdez et al ။ , 2004; funk et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ CRF ရန်အဘယ်သူအားမျှ (nondependent ကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့Valdez et al ။ , 2004) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း CRF များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, အကြံပြုအပ်ပါသည်။
CRF ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု1 မှီခိုသည်အထိအတွက်အရက်နှင့်နီကိုတင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် receptor ရန်
CRF ၏တိုးလာစကားရပ်1 receptors Marchigian Sardinian (msP) အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက် (မှာရှိတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Hansson et al ။ , 2006) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် postdependent ပြည်နယ်အတွက် nongenetically ရွေးချယ်ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် (Sommer et al ။ , 2008) ။ ယင်းဗီဇမရွေး msP ကြွက်လိုင်းများတွင်မြင့်မားသောအီသနော preference ကို၏တစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇ polymorphic ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် crhr1 ကမကထနှင့် CRF တစ်ခုတိုးလာ1 အဆိုပါ amygdala အတွက်သိပ်သည်းဆအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် CRF မှစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တိုးချဲ့ sensitivity ကိုတိုးမြှင် sensitivity ကို1 ရန် (Hansson et al ။ , 2006) ။ အီသနောမူးယစ်နှင့်မှီခိုများ၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာထိတွေ့ nongenetically ရွေးချယ်ထားသည့်ကြွက်တစ် CRF အတွက်1 ရန်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှုသည် CRF ၏ upregulation နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထား1 အဆိုပါ CRF ၏မျိုးဗီဇနှင့် downregulation2 အဆိုပါ amygdala အတွက်မျိုးဗီဇ (Sommer et al ။ , 2008) ။ အလားအလာကတော့ CRF ၏ကူးယူသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့် intron ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး R1876831 ၏ကို C allele များအတွက် homozygous မြီးကောင်ပေါက်1 အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇ (အခါသမယနှုန်းကိုပိုမိုအရက်သောက်နှင့် T-allele တင်ဆောင်လာသောဘာသာရပ်များထက်အနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်မြင့်မားတစ်သက်တာနှုန်းထားများခဲ့Blomeyer et al ။ , 2008) ။ ဤရလဒ်သည်လူ့လူဦးရေအတွက်သေချာသော Single-ဘေ့ polymorphic အလွန်အကျွံသောက်သုံး syndrome အချို့ Subtype မှအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်, ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ, အရက်၏ကုသမှုအတွက် CRF အဲဒီ receptor ရန်များအသုံးပြုခြင်းမှတုန့်ပြန်ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါ၎င်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
CRF နှင့်အတူအလားတူ interaction ကကိုကင်း, ဘိန်းဖြူများနှင့်နီကိုတင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်မှီခိုမှုနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုတစ် CRF ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းတစ်ခုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်1/ CRF2 ရန် (Sarnyai et al ။ , 1995; Basso et al ။ , 1999) ။ တစ်ဦးက CRF1/ CRF2 CRF ၏ amygdala နှင့်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ထိုးသွင်း peptide ရန်1 မိုးရွာသွန်းမှု opiate ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (ပိတ်ဆို့ရန်Heinrich et al ။ , 1995; Stinus et al ။ , 2005) ။ Opioid ရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (ထဲမှာ Vivo microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာသည် amygdala အတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်တိုးလာWeiss et al ။ , 2001) ။ CRF1 နောက်ကောက်ကြွက် (opioid ဆုတ်ခွာဖို့အခွအေနေအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြသရန်ပျက်ကွက်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် mRNA dynorphin အတွက် opioid-သွေးဆောင်တိုးပြသရန်ပျက်ကွက်Contarino နှင့် Papaleo, 2005) ။ intracerebroventricularly ထိုးတစ်ဦးက CRF ရန် (နီကိုတင်း၏ bolus ထိုးရာမှဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပိတ်ဆို့Tucci et al ။ , 2003) ။ နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေမိုးရွာဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများလည်း CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 အဲဒီ receptor ရန် (ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007()ပုံ 2) ။ တစ်ဦးက CRF1/ CRF2 peptide ရန်လည်း (ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းနီကိုတင်းဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့Bruijnzeel et al ။ , 2007) ။ စဉ်ဆက်မပြတ် 12 နာရီများအတွက်ကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်, opioid ဆုတ်ခွာ precipitated နှင့်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ precipitated (ထဲမှာ Vivo microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာ, ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း amygdala အတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်တိုးလာငလျင်နှင့် Weiss, 1999; Weiss et al ။ , 2001; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007()ပုံ 2) ။ CRF ၏ system administrator1 ရန် (ကိုကင်းများ၏တိုးချဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းပြန်ဘိန်းဖြူများနှင့်နီကိုတင်းတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်Specio et al ။ , 2008; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007; TN Greenwell, CK Funk, P. ဝါဂွမ်း, HN Richardson က SA ချန်, K. ဆန်, MJ Lee က, EP Zorrilla နှင့် GFK, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) ။
မူးယစ်ဆေးရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကို (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မှီခို-သွေးဆောင်တိုး၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှအလားတူရလဒ်တစ်ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း Shaham et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2003()ပုံ 1B) ။ ရောနှောထားသော CRF1/ CRF2 ရန် intracerebroventricularly ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် CRF1 ကိုကင်း, opiate, အရက်နှင့်နီကိုတင်းစားသုံးမှု (၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူးရန်Erb et al ။ , 1998; lu et al ။ , 2001; Shaham et al ။ , 1997, 1998; Shalev et al ။ , 2006; le et al ။ , 2000; လျူနှင့် Weiss, 2002; Gehlert et al ။ , 2007; Hansson et al ။ , 2006; Zislis et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုတစ်ဦးရောနှော CRF ၏ intracerebral ထိုးနှင့်အတူပုံတူကူးယူခဲ့ကြ1/ CRF2 ရန်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူး CRF1 အဆိုပါ stria terminalis, ပျမ်းမျှ raphe နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ရန်, ဒါပေမယ့်မ amygdala သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens (le et al ။ , 2002; Erb et al ။ , 2001; Erb နှင့် Stewart က, 1999; ဝမ် et al ။ , 2006, 2007), ထိုကဲ့သို့သော stria terminalis, ပျမ်းမျှ raphe နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များ, ကြောင်းမှီခို-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမတူဘဲအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း (ထို amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီလျက်ရှိသည်funk et al ။ , 2006).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, extrahypothalamic CRF စနစ်များ, စူးရှသောဆုတ်ခွာများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများဖြန်ဖြေအတွက် psychostimulants, opioids, အီသနောတို့အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါး, အဘို့အမှီခိုသူနဲ့ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်တိုးလာမယ့်အခန်းကဏ္ဍ cannabinoids (ကန့်သတ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူ) နီကိုတင်းနှင့်။ ဤအဆိုးကျိုးများအများစုမှာတိုးချဲ့ amygdala မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှရုပ်သိမ်းရေးအတွက် Vivo microdialysis (အားဖြင့်တိုင်းတာသည် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်တိုးလာကိန်းဂဏန်းများ 1B နှင့် and2) .2) ။ ရလဒ်တွေကိုဒီပုံစံကို (မှီခိုပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိသည်သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များဖြန်ဖြေအတွက် CRF များအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုKoob နှင့် Le Moal, 2005; Bruijnzeel နှင့်ရွှေ, 2005).
2.2 ။ Norepinephrine
Norepinephrine (ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်ကောင်းစွာထူထောင် neurotransmitter ဖြစ်ပါသည်ပုံ 4) နှင့် (နောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ) arousal, အာရုံစူးစိုက်မှု, စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေးဆခဲ့သည်။ ဦးနှောက် norepinephrine စနစ်များများအတွက် cell ကောင် dorsal pons နှင့် brainstem အတွက်အစပြုတာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ dorsal pons အတွက် locus coeruleus အဆိုပါ cortical နှင့် hippocampus ဖို့ dorsal noradrenergic လမ်းကြောင်း၏အရင်းအမြစ်သည်နှင့် brainstem အဆိုပြုချက်များကယင်း Basal forebrain နှင့် hypothalamus innervate ဖို့ ventral noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးအတွက်ဆုံ။
Norepinephrine receptors-αသုံးခုကွဲပြားမိသားစုများချည်နှောင်1, α2သုံးအဲဒီ receptor Subtype နှင့်β-adrenergic-တစ်ဦးချင်းစီ (Rohrer နှင့် Kobilka, 1998) ။ အဆိုပါα1 အဲဒီ receptor မိသားစုαပါဝင်သည်1a, α1bနှင့်α1d။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးကွဲ phospholipase C နဲ့αမြှင့်လုပ်ဆောင်2 နှင့်, G ပရိုတင်း, G မှတဆင့် inositol ဖော့စဖိတ်ဒုတိယတမန်စနစ် coupled နေကြတယ်q။ တစ်ဦးကဗဟိုတက်ကြွα1 မူးယစ်ဆေးမှီခိုသုတေသနများတွင်အသုံးပြုအဲဒီ receptor ရန် prazosin ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါα2 မိသားစုαပါဝင်သည်2a, α2bနှင့်α2c။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးကွဲအဆိုပါ inhibitory, G ပရိုတင်း, G ဖို့နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့် adenylate cyclase ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်i။ နှစျခုα2 လေ့မူးယစ်ဆေး-မှီခိုသုတေသနများတွင်အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးဝါးαများမှာ2 agonist clonidine နှင့်α2 ရန် yohimbine ။ အဆိုပါαသောကြောင့်2 အဲဒီ receptor presynaptic ဖြစ်တွေးဆသည်, ဒီဆေးတွေအသီးသီးတားစီးနှင့် noradrenergic function ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။ အဆိုပါβ-adrenergic အဲဒီ receptor မိသားစုβပါဝင်သည်1, β2နှင့်β3။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးကွဲဂျီပရိုတိန်း, G ဖို့နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့် adenylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင်s။ အနည်းငယ်β-adrenergic မူးယစ်ဆေးဝါးများယူဆရသောကွောငျ့ဆငျးရဲသောဦးနှောက် bioavailability ၏, ထိုβ-adrenergic ရန် propranolol ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေး-မှီခိုသုတေသနအတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာခြင်း (stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးWatanabe က et al ။ , 2003; Fuentealba et al ။ , 2000) ။ အဆိုပါ noradrenergic α2 agonist clonidine, presynaptic လုပ်ရပ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ norepinephrine ရန်, (, opioid ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းအစားအစာများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက် opioid ဆုတ်ခွာများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတိုင်းအရှည်ဖိနှိပ်မှုပိတ်ဆို့Sparber နှင့် Meyer, 1978) နှင့် opioid ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှု (အေးစက်သောအရပ်ဆန္ဒရှိ) (Schulteis et al ။ , 1998) ။ တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ (ကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်β-adrenergic ရန် propranolol နှင့် atenolol ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1993; ရွှေ et al ။ , 1980) ။ အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့β-adrenergic ရန်တိုက်ရိုက်ထိုးနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြRudoy နဲ့ဗန် Bockstaele, 2007) ။ Norepinephrine functional ဖြစ်စေရန် (β1 ရန်နှင့်α2 အဆိုပါ stria terminalis များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အိပ်ရာနျူကလိယမိုးရွာသွန်းမှု opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျဆန္ဒရှိပိတ်ဆို့သို့ agonist) (ထိုးသွင်းDelfs et al ။ , 2000), နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်β-adrenergic ရန် (Watanabe က et al ။ , 2003) ။ နောက်ထပ် opioid ဆုတ်ခွာကားမောင်းအတွက် norepinephrine ၏သက်ရောက်မှုဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီကြောင်းလေ့လာရေး (ventral noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးကိုတွေ့ရှိရပါသည် opioid ဆုတ်ခွာ attenuated ကြောင်းပြသDelfs et al ။ , 2000), ဒါပေမယ့် neurotoxin 6-hydroxydopamine အတူ locus coeruleus ထံမှ dorsal noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏နီးပါးပြည့်စုံကိုတွေ့ရှိရပါသည် opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ထုတ်လုပ်ရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိတ်ဆို့ဖို့ပျက်ကွက် (Caille et al ။ , 1999) ။ opioid ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု၏လေ့လာမှုများ, ပုαနှင့်ကိုက်ညီ1 တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူမှီခိုကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချ norepinephrine ရန် prazosin (Greenwell et al ။ , 2008) ။ Prazosin ကိုလည်းရွေးချယ်မူးယစ်ဆေး (မှီခိုထုတ်လုပ်ရန်တွေးဆသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) ကိုတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်တစ်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်း (ရန်တိုးလာလှုံ့ဆျောမှုပိတ်ဆို့Wee et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့-access ကိုကြွက်αနှင့်အတူအာရုံခံတစ်လျော့နည်းသွားအရေအတွက်ကိုပြသ1 သောαအကြံပြုသည့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် adrenergic ကဲ့သို့ immunoreactivity,1 အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် noradrenergic စနစ်ကလည်းကင်းမှီခိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ (Wee et al ။ , 2008).
သိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားလည်းတိရစ္ဆာန်နဲ့လူသားတို့အလယ်ပိုင်း noradrenergic စနစ်များကိုအီသနောထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်က activated နေကြသည်, ထိုအကြံပြုစုဆောင်းခဲ့ပြီးစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိနိုင်ပါသည်။ (လူသားများတွင်အရက်ဆုတ်ခွာ noradrenergic function ကို၏ activation နှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်လူသားတွေအတွက်အရက်ဆုတ်ခွာ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ postsynaptic β-adrenergic ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြသည်Romach နှင့်ရောင်းအား, 1991) ။ အရက်ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များလည်းα၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိတ်ဆို့ထားသည်1 ရန်နှင့်β-adrenergic ရန်နှင့် norepinephrine ပေါင်းစပ်၏ရွေးချယ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (Trzaskowska နှင့် Kostowski, 1983) ။ မှီခိုကြွက်များမှာα1 ရန် prazosin ရွေးချယ်စူးရှဆုတ်ခွာ (နဲ့အတူဆက်စပ်တိုးလာသောက်သုံးရေကိုပိတ်ဆို့ထားWalker က et al ။ , 2008) ။ ထို့ကြောင့်စုဆုံဒေတာကြောင့် noradrenergic neurotransmission အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ကြောင်း noradrenergic function ကိုလုပ်ကွက်များပြတ်တောက်အီသနောအားဖြည့်, မြားနှငျ့ noradrenergic functional ဖြစ်စေရန်အီသနောဆုတ်ခွာ၏ရှုထောင့်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
နာတာရှည်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (23 နာရီလက်လှမ်း) တွင် Vivo microdialysis (အားဖြင့်တိုင်းတာသည် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယနှင့် amygdala အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးဖူ et al ။ , 2001, 2003) ။ သို့သော်နီကိုတင်းဖို့ 23 နာရီလက်လှမ်းများ၏နှောင်းပိုင်းကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်စဉ်အတွင်း, norepinephrine လွှတ်ပေးရန်မရှိတော့ (အချို့ desensitization / သည်းခံစိတ်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်အကြံပြုသည် amygdala အတွက်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျဖူ et al ။ , 2003).
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် norepinephrine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မှီခို-သွေးဆောင်တိုး၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှအလားတူရလဒ်တစ်ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း Shaham et al ။ , 2003; lu et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါα2 (adrenergic agonist clonidine ကိုကင်း, opiate, အရက်၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင် reinstatement လျော့နည်းသွားနှင့်နီကိုတင်းရှာကြံle et al ။ , 2005; Erb et al ။ , 2000; Shaham et al ။ , 2000; Zislis et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါα2 ရန် yohimbine (ရှာကြံမူးယစ်ဆေးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းLee က et al ။ , 2004) ။ intracerebral ထိုးနှင့်အတူလီမိတက်လေ့လာမှုများကိုလည်း (ထို stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယမှမော်ဖင်းအကိုက်အေးစက်ရာအရပျဦးစားပေး၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ် norepinephrine စနစ်၏ functional ဖြစ်စေပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုခဲ့ကြဝမ် et al ။ , 2001) ။ စနစ်တကျအုပ်ချုပ်β-adrenergic ရန်လည်း (ရှာကြံကိုကင်းများ၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့Leri et al ။ , 2002).
2.3 ။ Dynorphin / κ Opioid စနစ်
Dynorphins (ထို prodynorphin ရှေ့ပြေးအနေဖြင့်ရယူထားခြင်းနှင့် leucine ဆံ့ကြောင်း opioid peptides (leu) ကိုမော်လီကျူး၏ N-terminal ကိုတစျပိုငျးကိုမှာ -enkephalin sequence ကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်κ opioid အဲဒီ receptor များအတွက်ယူဆရ endogenous ligands များမှာChavkin et al ။ , 1982) ။ Dynorphins (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးပြီWatson ဟာ et al ။ , 1982()ပုံ 5) နှင့် neuroendocrine စည်းမျဉ်း, နာကျင်မှုစည်းမျဉ်း, မော်တာလှုပ်ရှားမှု, နှလုံးသွေးကြော function ကို, အသက်ရှူ, အပူချိန်စည်းမျဉ်း, နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Response (အပါအဝင်ဇီဝကမ္မစနစ်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, တစ်အခန်းကဏ္ဍFallon နှင့် Leslie, 1986) () နောက်ဆက်တွဲမှာ Data ကိုကြည့်ပါ။ prodynorphin အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဖြစ်နိုင်သောထုတ်ကုန်တစ်ခု (1-17) dynorphin dynorphin တစ်ဦးက (1-8), နှင့် dynorphin B က (1-29) တို့ပါဝင်သည်။ Immunocytochemical dynorphin တစ်ဦးကဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် -B (သိသိသာသာဆဲလ်အသေကောင်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သောနျူကလိယ accumbens အဖြစ်စွဲ-သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဧရိယာများ, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယက, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၌၎င်း, hypothalamus ပြသFallon နှင့် Leslie, 1986) ။ Dynorphins (အားလုံးသုံး opioid receptors မှခညျြနှောငျပေမယ်κ receptors များအတွက်ဦးစားပေးပြသChavkin et al ။ , 1982) ။ အဆိုပါ dynorphin / κအဲဒီ receptor စနစ်အားအခြားအ opioids အလားတူလုပ်ရပ်များထုတ်လုပ်ပေမယ့်မကြာခဏ dynorphins တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသား (ထဲမှာဆန္ဒရှိ dysphoric ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးဒိုမိန်းအတွက်μ opioid receptors ၏သူတို့အားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလုပ်ရပ်တွေကို၏ activationShippenberg et al ။ , 2007).
Dynorphin ရှည်လျားအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆခဲ့သည်။ κအဲဒီ receptor agonists (ရာအရပျဆန္ဒရှိထုတ်လုပ်ရန်Shippenberg et al ။ , 2007) နှင့်လူသားတွေအတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့် dysphoria (Pfeiffer et al ။ , 1986) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dynorphin စနစ်များ၏ activation ရှည်လျားကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြင့် dopamine စနစ်များကို Activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ dopamine ၏ activation: D1 receptors နောက်ဆုံးတွင်စခန်းတုံ့ပြန်မှု-ဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း (CREB) phosphorylation နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်နောက်ဆက်တွဲကိုပြောင်းလဲ, အထူးသ protachykinin ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆို activation နှင့် prodynorphin mRNA မှဦးဆောင်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များ၏အဆငျ့ဆငျ့ကိုလှုံ့ဆော်။ dynorphin စနစ်များ၏နောက်ဆက်တွဲ activation (dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလျော့ချဖို့ကိုကင်းမှီခိုလည်းတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူဆက်စပ် dysphoric syndrome ရောဂါအထောက်အကူပြုနိုင်Nestler, 2005) ။ dynorphin စနစ်များ activation လည်း (စိတ်ဖိစီးမှုတစ် dysphoric အစိတ်အပိုင်းဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါမြေယာ et al ။ , 2008; McLaughlin et al ။ , 2003).
အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ neuroadaptive လုပ်ရပ်များအတွက် dynorphin / κ opioid စနစ်၏တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်သက်သေအထောက်အထားထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ရန်လေ့လာမှုများအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးအခြေခံသည်။ သိသိသာသာအထောက်အထား (dynorphin peptide နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ် striatum အတွက် activated ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု ventral striatum နှင့်ကိုကင်းနှင့်အရက်၏စူးရှသောနှင့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း amygdalaSpangler et al ။ , 1993; Daunais et al ။ , 1993; Lindholm et al ။ , 2000) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးတိုးμနှင့်κ opioid နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ, cingulate cortex နှင့် basolateral amygdala (များ၏နာတာရှည်မူးရူးပုံစံများUnterwald et al ။ , 1994).
minipump မှတဆင့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါတစ်ဦးကအလွန်အမင်းရွေးချယ်κ agonist, ရေရှည်အီသနောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွက်များတွင်အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု potentiated, ဒါပေမယ့်တစ်κရန်၏စူးရှသောဆေးထိုးအီသနောအရက်သောက်ယင်းကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုခြင်းမျှအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ κ agonists ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု (Holter et al ။ , 2000) ။ Non-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုက်ရိုက် dynorphin မှီခိုအတွက်စုဆောင်းသည့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်သလို-binaltorphimine အဆိုပါလေ့လာရေးသောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှု, intracerebroventricularly သို့မဟုတ်စနစ်တကျထိုးသွင်းသောအခါမှီခိုအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့သော်လည်းမ (Walker ကနှင့် Koob, 2008; BM Walker ကနှင့် GFK, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) ။ κနောက်ကောက်ကြွက်လည်း (အီသနော၏မြင့်တက်ဆေးများ အသုံးပြု. နှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုအတွက်လျော့နည်းအီသနောသောက်Kovacs et al ။ , 2005).
Opiate ဆုတ်ခွာခြင်း (amygdala အတွက် dynorphin အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးကြိမ် et al ။ , 1992) နှင့်နျူကလိယ accumbens (Turchan et al ။ , 1997) ။ ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သမိုင်းနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များ (ကိုယ့်လာမယ့်အချိန်ကာလသတ်မှတ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး session ကိုရှေ့တော်၌အချိန်အမှတ်မှာ striatum အတွက် dynorphin A နှင့် -B ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ပြသCappendijk et al ။ , 1999) ။ တစ်ဦးကကုသမှု dynorphin Intracerebroventricular ဘိန်းဖြူ-နှိုးဆွ dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်သိသိသာသာတစ်κရန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ (ရှိခဲ့သော်လည်းနေ့စဉ်5နာရီအစည်းအဝေးများအတွက်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ရှီ et al ။ , 1998).
စိတ်ဖိစီးမှု CRF စနစ်များနှင့်အတူတစ်ဦးအလားအလာအပြန်အလှန်အကြံပြု, dynorphin လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ တစ်ခုခုကိုκအဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် prodynorphin ဗီဇနှောင့်အယှက်, ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကို၏ပိတ်ဆို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement (မှတဆင့် dynorphin လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့ထားခြင်း,McLaughlin et al ။ , 2003) နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့ (Beardsley et al ။ , 2005) ။ အတင်းအကျပ်ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့မေးခှနျးထုတျ footshock တစ်κရန်နှင့် dynorphin နောက်ကောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြွက်တွေနေရာဆန္ဒရှိထုတ်လုပ်, ဒီမှာ, CRF တစ် CRF မှတဆင့်၎င်း၏ခြင်းကိုမနှစ်သက်အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်တွေးဆခဲ့သည်2 အဲဒီ receptor-dynorphin အပြန်အလှန် (မြေယာ et al ။ , 2008) ။ သက်သေအထောက်အထားလည်းκ opioid receptors ၏ activation မှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement CRF ကကမကထပြုခဲ့၏, ရှာကြံကင်း၏κ agonist-သွေးဆောင် reinstatement တစ် CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့ကွောငျးဖေါ်ပြခြင်းတည်ရှိ1 ရန် (Valdez et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့် dynorphin / κ system ကိုတုဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်အပြုအမူ inducing အတွက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးဖိအား, ဤဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုနျူကလိယနှင့်အတူအပြန်အလှန် interaction ကပါဝငျပမေ dopamine နဲ့ဦးနှောက် extrahypothalamic CRF system ကို accumbens ။
2.4 ။ Orexin
အာရုံခံ -containing (စ hypocretin အဖြစ်လူသိများ) Orexin (ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့်ကျယ်ပြန့်စီမံကိန်းကိုထံမှသီးသန့်ရရှိPeyron et al ။ , 1998), တစ်ဦးသိပ်သည်း arousal ထိန်းညှိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခန္ဓာဗေဒဆိုဒ်များ innervation, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဖိစီးပြည်နယ်များ (နဲ့အတူBaldo et al ။ , 2003()ပုံ 6) () နောက်ဆက်တွဲမှာ Data ကိုကြည့်ပါ။ Orexin A နှင့် orexin B ကိုနှစ်ခု, G ပရိုတိန်း-coupled receptors ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်လုပ်ရပ်များ, နွားကိုရှိ1 နှင့်နွားကို2 (စအသီးသီး hypocretin 1 နှင့် -2 အဖြစ်ရည်ညွှန်းပေမယ့် orexin တစ်ဦးက, orexin B ကို, နွားကို1နှင့်နွားကို2 ) ဆေးဝါးဗေဒ nomenclature ၏လက်ခံခဲ့သည်နိုင်ငံတကာယူနီယံဖြစ်ကြသည်။ နွားထီး1 ပိုမိုမြင့်မားသော orexin တစ်ဦးအဘို့အဆှဖှေဲ့နှင့်နွားကိုရှိပါတယ်2 (orexin A နှင့် -B နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တန်းတူဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်Sakurai et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါ orexin neuropeptides orexin A နှင့် orexin B ကိုအိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားစည်းမျဉ်း, စွမ်းအင် homeostasis နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး, neuroendocrine နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ဖျန်ဖြေခြင်းငှါ, HPA ဝင်ရိုးအပြင်၌, noradrenergic, cholinergic, serotonergic, histaminergic နှင့် dopaminergic စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်Sutcliffe နှင့်က de Lecea, 2002).
ပြည်တွင်းနှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ-Orexin (Hypocretin) ၏စီမံကိန်း
မှီခိုဆက်စပ်သည့် neuroadaptive ဖြစ်စဉ်များအတွက် orexin စနစ်များများအတွက်တစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကဦးနှောက် arousal-စိတ်ဖိစီးမှု function ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတွေးဆခဲ့ကြသည်။ Orexin အာရုံခံမူးယစ်ဆေးရှာထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် Orexin အာရုံခံထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်နွယ်တွေကိုအားဖြင့် activated နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံ reinstates ၏ exogenous ဆွ (ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူငွိမျးနေကြတယ်Harris က et al ။ , 2005) ။ နွား၏ injection1 ရန် (မော်ဖင်းအကိုက်ထုတ်လုပ်ရာအရပ် preference ကိုလျော့နည်းသွားနာရီတာ et al ။ , 2006).
တစ်ဦးသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကိုသုံးပြီး, orexin တစ်ဦး၏အုပ်ချုပ်မှုယခင်ကငွိမျးကင်း-ရှာကြံအပြုအမူပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေမယ်ထက်ဆုလာဘ် potentiating, orexin တစ်ဦးက (ကကြာရှည်ခံဦးနှောက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုသွေးဆောင်Boutrel et al ။ , 2005) ။ orexin အားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement လည်း noradrenergic သို့မဟုတ် CRF အဲဒီ receptor ရန်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ နွားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း1 receptors (ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ footshock-သွေးဆောင် reinstatement တားဆီးBoutrel et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ perifornical-dorsomedial hypothalamus အတွက် orexin အာရုံခံစိတ်ဖိစီးမှု activation ဖျန်ဖြေသော်လည်းထို့အပြင် footshock စိတ်ဖိစီးမှု / ဆုလာဘ် activation / arousal ဖျန်ဖြေသည့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်အာရုံခံ orexin သောအယူအဆမှဦးဆောင်သည့် perifornical-dorsomedial hypothalamus အတွက် orexin အာရုံခံ၏ activation အပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရူးနှမ်း arousal / မှတ်ဥာဏ် (Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2006) ။ Orexin တစ်ဦးက, ဖြစ်နိုင်သည် perifornical-dorsomedial hypothalamus ကနေ (အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယနှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF-ဖော်ပြအာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်Sakamoto et al ။ , 2004) ။ CRF အာရုံခံ (ဖြစ်နိုင်သည်တိုးချဲ့ amygdala ကနေ orexin အာရုံခံ innervateWinsky-Sommerer et al ။ , 2004), တစ်ဝတ္ထုအပြန်အလှန်စိတ်ဖိစီးမှု-activation စနစ်ကအကြံပြု။ ယေဘုယျအားဤရလဒ်များကိုယခင်ကငွိမျးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ reinstatement ထိန်းညှိအတွက် orexin နှင့်ဆုလာဘ် / စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းများအကြားတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အပေါ်တိကျတဲ့ orexin peptide receptors နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်က်ဘ်ဆိုက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်လေ့လာရေးစူးစမ်းခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
2.5 ။ Vasopressin
အဆိုပါ neurohypophysial peptide vasopressin အဆိုပါ posterior pituitary (နောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ) ကနေဆင်းသက်လာတစ်ခု antidiuretic ဟော်မုန်းအဖြစ်က၎င်း၏ဂန္အခန်းကဏ္ဍအပြင်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်လုပ်ရပ်တွေကိုရှိပါတယ်။ Vasopressin ကျယ်ပြန့်ခြင်း (hypothalamus ပြင်ပဦးနှောက်ထဲမှာဖြန့်ဝေနှင့်အမြင့်ဆုံး vasopressin ပြင်းအားဟာ suprachiasmatic နှင့် supraoptic အရေးပါ၌ရှိကြ၏, ဒါပေမယ့်သိသိသာသာအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း septum နှင့် locus coeruleus အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပုံ 7) ။ Vasopressin အာရုံခံ (ထိုတိုးချဲ့ amygdala အဆိုပါ stria terminalis ၏ medial အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာဆဲလ်အသေကောင်ထံမှရယူထားခြင်းမှတွေးဆကြသည် innervatingက de Vries နှင့် Miller က 1998) ။ V ကို: Vasopressin သုံးခုကွဲပြားခြားနားသော, G ပရိုတိန်း-coupled receptor Subtype မှချည်နှောင်1a, V ကို1bနှင့် V ကို2။ အဆိုပါ V ကို2 အဲဒီ receptor က vasopressin ၏ antidiuretic အရေးယူ mediates ရှိရာကျောက်ကပ်အတွက်နီးပါးသီးသန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ V ကို1a နဲ့ V1b receptors ဦးနှောက်မှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနှင့် vasopressin အဲဒီ receptor ၏ဖြန့်ဖြူး binding ကြွက်တိုးချဲ့ amygdala အတွက်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ထို stria terminalis များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် supracapsular အိပ်ရာနျူကလိယက, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ, နှင့်နျူကလိယ၏ shell ကိုမြင့်မားပြင်းအားနှင့်အတူနေကြတယ် accumbens (Veinante နှင့် Freund-Mercier, 1997).
Vasopressin mRNA အဆင့်ဆင့်ဘိန်းဖြူထံမှအစောပိုင်းအလိုအလျောက်ရုပ်သိမ်းနှင့်တစ်ဦးရွေးချယ် V ကိုစဉ်အတွင်း amygdala အတွက်ရွေးချယ်တိုးပွားလာခဲ့သည်1b အဲဒီ receptor ရန်, SSR149415, (ထို amygdala အတွက်စနစ်များကို vasopressin opioid ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုအကျိုးဆက်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း, ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူ၏ footshock-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့zhou et al ။ , 2008) ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှု (ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum မှ vasopressin-ကဲ့သို့ hypothalamus အတွက် immunoreactivity နှင့် stria terminalis စီမံကိန်း၏အိပ်ရာနျူကလိယယုတ်လျော့Gulya et al ။ , 1991) ။ တစ်ဦးကရွေးချယ် V ကို1b အဲဒီ receptor ရန်ထိုး-ရသည်မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးပိတ်ဆို့ပေမယ် nondependent တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ (အက်စ် Edwards က et al ။ , 2008, Soc ။ neuroscience ။ , စိတ္တဇ) ။ ယနေ့အထိအနည်းငယ်လေ့လာမှုများမှီခိုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ရန် vasopressin များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော်စာပေကြောင်း V ကိုအကြံပြု1b ရန် anxiolytic တူသောပရိုဖိုင်း (နောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ) နှင့် vasopressin ရှိသည်နှင့်ယင်း၏ receptors မြင့်မားသည့်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် vasopressin စနစ်များကိုမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့အရက်စားသုံးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆမှယုံချေးငှားသည်အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
3 ။ ဦးနှောက် Antistress စနစ်များနှင့်စွဲမှု: Neuropeptide Y နှင့် Nociceptin
3.1 ။ Neuropeptide Y ကို
Neuropeptide Y ကို (NPY) အစွမ်းထက် orexigenic နှင့် anxiolytic ကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များ (နောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ) နှင့်အတူတစ်ဦး 36 အမိုင်နိုအက်ဆစ် polypeptide ဖြစ်ပါတယ်။ NPY ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တစ်လျှောက်လုံးပေမယ့်တိုးချဲ့ amygdala (မြင့်ပြင်းအားနှင့်အတူကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေသည်Adrian et al ။ , 1983()ပုံ 8) ။ အကွိမျမြားစှာ NPY အဲဒီ receptor Subtype အဆိုပါ Y ကိုအတူဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ1 နဲ့ Y2 Subtype အများဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ရပ်များအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ အဆိုပါ Y ကို1 အဲဒီ receptor (ထိုကြွက်ကအများဆုံးဖောဖောသီသီအဆိုပါ cortex ၌တွေ့သည်အဘယ်မှာရှိဦးနှောက်, olfactory tubercle, hippocampus, hypothalamus နှင့် thalamus တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ်က Parker နှင့် Herzog, 1999) ။ Y က၏ဖြန့်ဝေ2 receptors Y ကို၏ဆင်တူသည်1 Y ကပေမယ့် receptors,2 အဲဒီ receptor စကားရပ်ကို (cortex နဲ့ thalamus အတွက်လျော့နည်းပေါများခြင်းနှင့် hippocampus ပိုမိုပေါများက Parker နှင့် Herzog, 1999) ။ Y က1 receptors postsynaptic နဲ့ Y ဖြစ်တွေးဆကြသည်2 presynaptic receptors (Heilig နှင့် Thorsell, 2002).
ပြည်တွင်းနှင့်ဦးနှောက် Antistress စနစ်များ-Neuropeptide Y ကို၏စီမံကိန်း
NPY အုပ်ချုပ် intracerebroventricularly ပိတ်ဆို့အီသနောဆုတ်ခွာ (Woldbye et al ။ , 2002) ။ သူတို့အရက်ငွေ့ (မှနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အရက်သေစာမှီခို၏သမိုင်းရှိခဲ့လျှင်ကြွက်များတွင်မှီခို-သွေးဆောင်အရက်သောက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ NPY Wistar ကြွက်များတွင် intracerebroventricularly လျှော့ချကန့်သတ်-access ကိုအရက်စားသုံးမှုအုပ်ချုပ်ကြောင်းပြသThorsell et al ။ , 2005) ။ ထို့အပြင်ရွေးချယ်မြင့်မားသောအရက် preference ကိုအဘို့အရပ်ကြီးပေမယ့် (၎င်းတို့၏အနိမ့်အရက်- သာ. နှစ်သက် counterparts တွေကိုထဲမှာအရက်စားသုံးမှုပြောင်းလဲမပြုခဲ့ကြွက်များတွင်အရက်စားသုံးမှုနှိမ်နင်း Intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPYBadia-အသက်ကြီး et al ။ , 2001, 2003) ။ P ကိုကြွက်များတွင်သောက်သုံးအီသနောအပေါ် intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPY ၏ဖိနှိပ်သက်ရောက်မှု (ချမှတ်ထားအရက် abstinence ၏အောက်ပါကာလတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တာရှညျဖြစ်ပါတယ်Gilpin et al ။ , 2003) ။ NPY ၏ Intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး (Wistar ကြွက်များကန့်အသတ်-access ကို nondependent အရက်စားသုံးမှုမထိခိုက်ခဲ့ပါBadia-အသက်ကြီး et al ။ , 2001).
NPY ၏ Anti-စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ (ဗဟိုသို့မဟုတ် basolateral amygdala ရှုပ်ထွေးသောကကမကထပြုခဲ့သောသက်သေအထောက်အထားပေးထားHeilig et al ။ , 1994), အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုအတွက် NPY-သွေးဆောင်ကျဆင်းခြင်းရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်ယုတ္တိဆိုဒ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသည်။ အီသနောဆုတ်ခွာခြင်း (amygdala ၏ဗဟိုနှင့် medial အရေးပါအတွက် NPY ပရိုတိန်းလျော့နည်းသွားရွိုင်းနှင့်နှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး, 2002) ။ တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို encoding က prepro-NPY ၏ပြုတ်ရည်ဟာမြင့်မားသောပေါင်းဝင်္ (ထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူပြသကြောင်း Long-အီဗန်ကြွက်များအားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်-access ကိုအရက်သောက်သုံးမှုကိုလျှော့ချPrimeaux et al ။ , 2006) ။ မှီခိုနှင့်မျိုးစုံ abstinence ကာလတစ်သမိုင်းနှင့်အတူ Wistar ကြွက်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ် NPY overexpression လျှော့ချစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ amygdala အားနည်းချက်ကို-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်သောက်သုံးအရက်၏ရေရှည်ဖိနှိပ်မှုထုတ်လုပ် (Thorsell et al ။ , 2007) ။ အရက်သောက်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ P ကိုကြွက်များတွင်တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ NPY ၏တာဟာ (ချမှတ်ထားအရက် abstinence ၏ကာလကိုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ P ကိုကြွက်များကိုသာသောက်သုံးအရက်သေစာနှိမ်နင်းGilpin et al ။ , 2008) ။ P ကိုကြွက် (အရက်-nonpreferring ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါထို amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် correlationally ပိုမိုမြင့်မားစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက် NPY ၏အောက်ပိုင်း Basal အဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဖို့ပြသပြီဆူဇူကီး et al ။ , 2004; နှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး et al ။ , 2005) ။ CREB function ကိုသို့မဟုတ် NPY ၏တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုမြားတှငျပွောငျးလဲမှတဆင့်ထုတ်လုပ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် NPY လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုး, (Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုတောင်းတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူ P ကိုကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားနှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး et al ။ 2005) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့အုပ်ချုပ်ခွင့် Exogenous NPY လည်းသိသိသာသာ (အရက်-မှီခိုကြွက်များအားဖြင့်အရက်သောက်ခြင်းလျော့နည်းသွားသော်လည်းမ nondependent ထိန်းချုပ်မှုအတွက်Gilpin et al ။ , 2008), NPY လှုပ်ရှားမှုဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-သွေးဆောင်သော induction နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိရလဒ်ကိုအတည်ပြု (Thorsell et al ။ , 2007).
Y ကနှစ်ဦးစလုံး1 နဲ့ Y2 အဲဒီ receptor Subtype အရက်မှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ Y က1 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက် (တိုးလာအရက်သောက်ပြသသီရဲလ် et al ။ , 2002) ။ ဆနျ့ကငျြ, Y ကို2 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက် (သိသိသာသာလျော့နည်းအရက်မသောက်ရသီရဲလ် et al ။ , 2004) ။ Pharmacological လေ့လာမှုများ Y ကို၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုအတည်ပြုကြ1 receptors (C57BL /6High-အရက်သောက်ကြွက်တွေမှာအီသနောစားသုံးမှုတိုးပွါးSparta et al ။ , 2004) နှင့် Y ကို၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း2 receptors (မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေRimondini et al ။ , 2005) နှင့်မွှေးဖြေရှင်းချက်ထဲမှာအီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် (Thorsell et al ။ , 2002) ။ Y က1 နောက်ကောက်ကြွက်တွေနဲ့ Y1 ရန်အဖြစ် anxiogenic တူသောပရိုဖိုင်းကိုပြနဲ့ Y2 နောက်ကောက်ကြွက်တွေနဲ့ Y2 ရန် (အရှင်မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဆိုပါ NPY သည့်စနစ်အကြားအရေးကြီးသော link ကို, စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အရက်စားသုံးမှုပေးတစ်ဦး anxiolytic တူသောပရိုဖိုင်းကိုပြသValdez နှင့် Koob, 2004) ။ မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကျယ်ပြန့်အလုပ်အတူပေါင်းလိုက်သောအခါဤလေ့လာမှု NPY system ကို nondependent ထံမှမှီခိုသောက်သုံးရန်အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအရက်သောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ amygdala အတွက် NPY လှုပ်ရှားမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အရက်-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းအီသနောမှီခိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများထဲမှာမသာပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တဦးတည်းအယူအဆ, CRF ၏တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပြိုင် NPY ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားကြောင်းအရက်ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအရက်သောက်မောင်းကြောင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence (စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့အရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအခြေခံများကိုဖြစ်နိုင်သည်Heilig et al ။ , 1994).
NPY အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခို်ပတ်သက်နေခဲ့ပေမယ့် extant စာပေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်ဘူး။ အဆိုပါ stria terminalis ၏ thalamic paraventricular နျူကလိယနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် immunohistochemistry ဖြင့်တိုင်းတာနာတာရှည်ဘိန်းဖြူကုသမှုတိုးလာ NPY အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု (D'Este et al ။ , 2006) ။ intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPY အဆိုပါ opioid ရန် naloxone အားဖြင့် precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာ၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များပိတ်ဆို့, ဤအပြုအမူအပြောင်းအလဲများ c- အတွက်လျှောက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်fos အဆိုပါ locus coeruleus, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septal နျူကလိယ, periaqueductal မီးခိုးရောင်, cingulate နှင့်တိုကျရိုကျ cortical နှင့် septohippocampal နျူကလိယ (ထဲမှာစကားရပ်Clausen et al ။ , 2001) ။ intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPY နှင့် NPY peptide analog (ကြွက်များတွင် naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာလျော့နည်းသွားWoldbye et al ။ , 1998).
3.2 ။ Nociceptin (Orphanin FQ)
Nociceptin ဆေးဝါးဗေဒ nomenclature အပေါ် nociceptin / orphanin FQ peptide (NOP) အဲဒီ receptor (ထိုလက်ခံခဲ့သည်နိုင်ငံတကာယူနီယံများအတွက် endogenous ligand ဖြစ်၏အဲဒီ receptor ကိုလည်းမိဘမဲ့ opioid အဲဒီ receptor သို့မဟုတ် opioid အဲဒီ receptor-တူသော-1, ဒါမှမဟုတ် ORL-1 အဲဒီ receptor အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားသည် ) (Mollereau et al ။ , 1994) ။ Nociceptin (က dynorphin အဆိုပါ opioid peptide မှဖွဲ့စည်းပုံဆက်စပ်တဲ့ 17 အမိုင်နိုအက်ဆစ် polypeptide ဖြစ်ပါသည်Reinscheid et al ။ , 1995; Meunier et al ။ , 1995) ။ Nociceptin δ, μမှခညျြနှောငျခွငျးသို့မဟုတျκ receptors, နှင့်မျှမလူသိများ opioids အဆိုပါ NOP အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျမထားဘူး။ ဦးနှောက်မြေပုံလေ့လာမှုများကို (neuroanatomical nociceptin ၏ဖြန့်ဝေနှင့်၎င်း၏အဲဒီ receptor ကိုအခြား opioid peptides သူတို့ထံမှကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းပြသခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းဒေသခံရေတိုအနာဂတ်ဆားကစ်ကိုကိုယ်စားပြုကြပါပြီNeal et al ။ , 1999()ပုံ 9) ။ အမြင့်ဆုံး nociceptin ၏သိပ်သည်းဆနှင့်၎င်း၏အဲဒီ receptor အဆိုပါ cortex တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, amygdala, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, medial prefrontal cortex, အ locus coeruleus နှင့် raphe အပါအဝင် ventral tegmental ဧရိယာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, နျူကလိယ accumbens နှင့်များစွာသော brainstem ဒေသများ, (Darland et al ။ , 1998; Neal et al ။ , 1999).
ပြည်တွင်းနှင့်ဦးနှောက် Antistress စနစ်များ-Nociceptin / Orphanin FQ ၏စီမံကိန်း
NOP အဲဒီ receptor agonists, ရန်နှင့်နောက်ကောက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် analgesia, anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (နောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ) ပိတ်ဆို့ခြင်းအပါအဝင်မြောက်မြားစွာအလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုရှိသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု-related တုံ့ပြန်မှုအတွက် nociceptin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်ကိုက်ညီသည် nociceptin စနစ်ကအစဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များအပေါ်လုပ်ရပ်တွေကနေတဆင့်မှီခို modulate လိမ့်မည်။ nociceptin နှင့်အတူ Intracerebroventricular ကုသမှု (Ciccocioppo et al ။ , 1999, 2004) သို့မဟုတ် peptidic NOP အဲဒီ receptor agonists (Economidou et al ။ , 2006) သိသိသာသာ msP ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှု (က nociceptin ရန်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်Ciccocioppo et al ။ , 2003) ။ သို့သော်တစ်ဦး C57BL /6နောက်ခံပေါ်သို့ backcrossed NOP နောက်ကောက်ကြွက်လည်း (က Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းပြသSakoori နှင့်မာဖီ, 2008), နှင့် NOP အဲဒီ receptor agonist အုပ်ချုပ်ရေးအချို့ regimen (အီသနောစားသုံးမှုတိုးပွားလာEconomidou et al ။ , 2006).
သိသိသာသာ (Wistar ကြွက်များတွင်အပြုအမူရှာကြံ (cocaine- ပေမယ့်မဟုတ်) ethanol- ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement လျှော့ချ Nociceptinမာတင်-Fardon et al ။ , 2000) နှင့် msP ကြွက်များတွင် cue-သွေးဆောင် reinstatement (Ciccocioppo et al ။ , 2003) ။ ထို့အပြင် NOP အဲဒီ receptor ၏ activation (ကြွက်တွေမှာ ethanol- နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မူးယစ်သွေးဆောင် reinstatement inhibitedKuzmin et al ။ , 2003; Shoblock et al ။ , 2005) နှင့် msP ကြွက်များတွင်အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မော်ဒယ်အတွက် relapse ကဲ့သို့သောအပြုအမူတားဆီး (Kuzmin et al ။ , 2007).
ထို့ကြောင့် nociceptin စနစ်၏ activation ဖိအား hypersensitive ဖြစ်လူသိများနေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုရှေးခယျြလိုင်းအတွက်ပိတ်ဆို့အီသနောစားသုံးမှု, antistress သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်, နေရာ preference ကိုတိုင်းတာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားနှင့်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement လျော့နည်းသွားသည်။ မှီခို-သွေးဆောင်သောက်သုံးရေအတွက် nociceptin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အရက်သောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးယူမှု၎င်း၏ site ၏မူပြောင်းခြင်းအနာဂတ်အလုပျအတှကျနေဆဲဖြစ်သည်။
4 ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala အတွက်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုနှင့် antistress စနစ်များ element တွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များကိုထိခိုက်ဖို့တိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဘုံယန္တရားများအပေါ်စီးရီးဒါမှမဟုတ်အပြိုင်လုပျဆောငျဖို့တွေးဆနိုင်ပါသည်။ electrophysiological နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ဆယ်လူလာလေ့လာမှုများဘုံယန္တရားများ elucidate မှပါဝါရှိသည်။ ယနေ့အထိအများစုလေ့လာမှုများတိုးချဲ့ amygdala အတွင်းγ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) သို့မဟုတ် glutamatergic လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကိုစူးစမ်းကြနှင့်အချို့သောမျဉ်းပြိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏အမူအကျင့်-neuropharmacological အဆင့်မှာပေါ်လာသောဆယ်လူလာ level မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။
အဆိုပါ amygdala ခုနှစ်, CRF အဆိုပါ stria terminalis နှင့် enkephalin နှင့်အတူ colocalized သောသူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားသော amygdala (ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် GABAergic အာရုံခံတစ် subpopulation အတွင်းဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်နေ့ et al ။ , 1999) ။ ဦးနှောက်အချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာတော့ CRF ဂါဘမြို့သားတိုးမြှင့်A inhibitory postsynaptic အလားအလာ (IPSCs) လုံးဆဲလ်ဟာ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အသံသွင်း, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 ရန်နှင့် CRF အတွက်1 နောက်ကောက်ကြွက် (Nie et al ။ , 2004) ။ Nociceptin (ထို amygdala-လျော့ကျလာ GABAergic IPSCs ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရောဘတ်နှင့် Siggins, 2006) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ medial အစိတ်အပိုင်းအတွက် Vasopressin လည်း activated ဆဲလ် (Huber et al ။ , 2005) ။ ဤရလဒ်သည် anxiogenic-ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သောအရာ CRF နှင့် vasopressin ပြခြင်း, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် GABAergic interneurons ကိုသက်ဝင်။
အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအများစုသည်အာရုံခံ (ဥပမာပု stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ) brainstem သို့မဟုတ်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများသို့မှုများထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ် feed ကို-ရှေ့ဆက်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ် inhibitory projection အာရုံခံနှင့်အတူ GABAergic, ဖြစ်စေ inhibitory interneurons ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdaloidal ဆားကစ်ကတဆင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိတဲ့ "တံခါးဝ" အဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်, နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင် GABAergic inhibitory စနစ်၏ဒဏ်ငွေ-tuning ထိန်းချုပ်များအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည် မြစ်အောက်ပိုင်းအရေးပါရန်ပြည်တွင်းနှင့်အထွက်တွင် neuron နှစ်ဦးစလုံး။ GABAergic မူးယစ်ဆေးဝါးများပုံမှန်အားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့ anxiolytics ဖြစ်ကြသည်သောကြောင့်, anxiogenic ကဲ့သို့ neurotransmitters GABAergic neurotransmission နှင့် anxiolytic ကဲ့သို့ neurotransmitters ကိုသက်ဝင်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများတဲ့ဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ GABAergic ဂီယာဝိရောဓိထင်ရစေခြင်းငှါစိတ်ကျရောဂါလိမ့်မယ်။ သို့သော် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းဒေသခံ GABAergic လှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်သတင်းအချက်အလက်ကို (amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ disinhibiting အသုံးပြုပုံဥပမာ) ဒေသခံအချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdaloidal ဆားကစ်ကတဆင့်စီးဆင်းထိန်းညှိသော amygdala Gates ၏ inhibitory အလယ်ပိုင်းနျူကလိယ၏အာရုံခံ Response function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ အဆိုပါအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေကြောင့်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင်တိုးမြှင့်တားစီးဖို့။
အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၌, အချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအနေဖြင့်လုံးဆဲလ်အသံသွင်း CRF GABAergic neurotransmission တိုးမြှင့်ကြောင်းသရုပ်ပြများနှင့် CRF အကျိုးသက်ရောက်မှု CRF မှတဆင့်ဖြစ်ထငျရှား1 အဆိုပါ amygdala အတွက်ဆိုးကျိုးများဆင်တူအဲဒီ receptor နှင့် NPY ဘယျလိုမှမ GABAergic neurotransmission (Kash နှင့် Winder, 2006) ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏မြင်သာထင်သာ noradrenergic innervation အဆိုပါ ventral အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး, ဒီနေရာမှာ norepinephrine နှစ်ဦးစလုံး electrophysiologically နှင့် Vivo microdialysis (နှင့်အတူတိုင်းတာ glutamatergic လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျEgli et al ။ , 2005; Forray et al ။ , 1999) ။ Norepinephrine ကိုလည်းတိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားA IPSCs (Dumont နှင့်ဝီလျံ, 2004) ။ တ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယကနေဒေတာတွေကိုနှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယပေါင်းစပ်လျှင်ထို့ကြောင့်, ထို့နောက်အချို့တသမတ်တည်း (တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစားပွဲတင် 3) ။ neuropharmacological လေ့လာမှုများနှင့်အတူအထက်ဖော်ပြထားတဲ့အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှအပြိုင်သောဆယ်လူလာ level မှာ CRF, vasopressin နှင့် norepinephrine GABAergic လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်း, NPY နှင့် GABAergic လှုပ်ရှားမှုလျော့ nociceptin, လုပ်ရပ်တွေကို (စားပွဲတင် 3).
အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala အတွက် GABAergic လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု Neurotransmitters ၏ဆိုးကျိုးများ
သည်အခြားသုတေသီများကို (amygdala ၏ basolateral နျူကလိယအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွားလာ CRF ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြRainnie et al ။ , 2004) ။ တိရစ္ဆာန်များ၏ basolateral amygdala အာရုံခံကနေတပြင်လုံးကို-ဆဲလ် patch ကို-ညှပ်အသံသွင်းအသုံးပြုခြင်းနာတာရှည်တစ် CRF အုပ်ချုပ်1/ CRF2 agonist, urocortin တစ်ခုပြသ Nအလိုအလျောက်နှင့်ဆွ-evoked IPSPs (နှစ်ဦးစလုံးအတွက် -methyl-D-aspartate (NMDA) အဲဒီ receptor-mediated ကျဆင်းခြင်းRainnie et al ။ , 2004) ။ အီသနောရုပ်သိမ်းရေး, diazepam ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း (လုံး-ဆဲလ် patch ကို-ညှပ်ပြင်ဆင်မှုသုံးပြီး basolateral amygdala အတွက်ဆဲလ် IPSCs ဖိနှိပ်Isoardi et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကား NMDA-mediated သက်ရောက်မှုများ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာအဆိုပါဂါဘမြို့သား-mediated သက်ရောက်မှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မှီခိုတုံ့ပြန်မှုအတွက် amygdala ၏ဗဟိုနှင့် basolateral အရေးပါ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ခုပေါင်းစည်းမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အီသနောမှီခိုနှင့်အတူမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, အနည်းငယ်သာအလုပ်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် neurotransmission အတွက်အပြောင်းအလဲများပေါ်တွင်တိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဆယ်လူလာ level မှာပြုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းဂါဘမြို့သား interneurons ၏အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွင်းနာတာရှည်အီသနော-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို CRF နှင့် nociceptin အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုချိတ်ဆက်ပြီ။ အဆိုပါမူးယစ်အကွာအဝေးတိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားအတွက်အရက်၏အညွှန်းများကို acute အုပ်ချုပ်ရေးA အဲဒီ receptor-mediated အဆိုပါ amygdala အာရုံခံ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် IPSCs, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု (presynaptic ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးဖို့တွေကပေါ်ကနေဖြစ်တွေးဆထားသည်ရောဘတ် et al ။ , 2003; Nie et al ။ , 2004) ။ ပို. ပင်ဒီကဗျာဟာလုပ်ခဲ့ပြီးဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန် electrophysiological နှင့် Vivo microdialysis အစီအမံ (နေဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအားပြပင်ထပ်မံမှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးပွါးကြောင်းရောဘတ် et al ။ , 2004) ။ GABAergic IPSCs ၏အီသနော-သွေးဆောင်တိုးမြှင့် CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 ရန် (Nie et al ။ , 2004; ရောဘတ် et al ။ , 2004) နှင့် CRF အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရ1 နောက်ကောက်ကြွက် (Nie et al ။ , 2004) ။ IPSCs ၏ Nociceptin-သွေးဆောင်တားစီး (nociceptin တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုအကြံပြုခြင်း, မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်ရောဘတ်နှင့် Siggins, 2006) ။ ထို့ကြောင့်ဦးနှောက်ကိုဖိစီး / antistress စနစ်များ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏တွေးဆ GABAergic interneurons နှင့်အတူစနစ်တကျအပြန်အလှန်မသာပေမယ့်အီသနောမှီခိုလည်းဦးနှောက်ကဖိစီးမှု / antistress စနစ်များ၏လုပ်ရပ်များဤအာရုံခံ sensitizes ။
5 ။ မှီခိုအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏ Neurocircuitry
ငါးအလားအလာ arousal-စိတ်ဖိစီးမှု neurotransmitter စနစ်များ (CRF, norepinephrine, vasopressin, orexin, dynorphin) နှင့်နှစ်ဦးကိုအလားအလာ antistress neurotransmitter စနစ်များ (NPY, nociceptin) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်စပ် neuroadaptation အတွက်အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြ မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ။ ဆုံးဆွဲဆောင်မှုဒေတာအလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးအဘို့, (1) CRF စူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကဖြန့်ချိသည်အဘယ်မှာရှိ, CRF ၏ဒိုမိန်း၌ရှိကြ၏, (2) CRF ရန်စူးရှဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ, (3) CRF ပိတ်ဆို့ ရန်မှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်အလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုပိတ်ဆို့, နှင့် (4) CRF ရန်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့။ ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများအများစုများအတွက် Focal Point သည် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ (တွေ့မြင် ပုံ 1).
နည်းကျယ်ပြန့်ခဲ့သော်လည်း, အလားတူဒေတာ opiate ရုပ်သိမ်းရေး, အီသနော, ကိုကင်းများနှင့် opioids အပေါ်မှီခိုနေနှင့်ဆက်စပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှု၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပိတ်ဆို့အချို့ noradrenergic ရန်အဘို့အတည်ရှိများနှင့်ကင်းဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့, opioids, အီသနော နှင့်နီကိုတင်း (ကြည့်ရှု ပုံ 4) ။ နောက်တဖန်ဤဆိုးကျိုးများအများအပြားများအတွက် Focal Point သည် amygdala နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယသည်။
အများကြီးအထောက်အထား dynorphin dopaminergic activation တုံ့ပြန်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးလာသည်နှင့်, အလှည့်၌, dynorphin စနစ်များကြောင့် overactivity dopaminergic function ကိုလျော့ချနိုင်သည်ကိုပြသနိုင်ဖို့တညီတညွတ်တည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ κရန် (ကိုတွေ့မြင်မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အီသနောမှီခိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်အတူဆက်စပ်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ဖို့ပြသပြီ ပုံ 5) ။ သက်သေအထောက်အထား (κအဲဒီ receptor activation CRF လွှတ်ပေးရန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုသီချင်းနှင့် Takemori, 1992), ဒါပေမယ့်မကြာသေးခင်ကအချို့ (CRF စနစ်များကို Activation မှတဆင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များထုတ်လုပ် dynorphin ၏သက်ရောက်မှုကမကထပြုခဲ့ကြသည်ဟုစောဒကပါပြီမြေယာ et al ။ , 2008).
ယနေ့အထိအများကြီးလျော့နည်းသက်သေအထောက်အထား (တွေ့မြင်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက် vasopressin နဲ့ orexin များအတွက်တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြထားပါတယ် ကိန်းဂဏန်းများ6နှင့် and7) .7) ။ တစ်ဦးက vasopressin ရန်ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်အီသနောအရက်သောက်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့နှင့်တစ်ဦး orexin ရန်ကင်းရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့။ ပိုပြီးအလုပ်ထိုကဲ့သို့သော CRF ကဲ့သို့သောအခြားအဓိကကစားသမားများနှင့်အတူထိုအမှုစနစ်များနှင့်၎င်းတို့၏ interaction က၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာစူးစမ်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
သိသာထင်ရှားသောအထောက်အထား amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် NPY ၏ activation နာတာရှည်အီသနောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှီခိုမှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPY (တွေ့မြင်အီသနောထံမှဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပိတ်ဆို့နှင့်အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့ ပုံ 8) ။ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ NPY ၏ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-တိုးမြှင်စကားရပ်တွင်အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးချဲ့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့။ အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမလေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမှီခို၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အပေါ် NPY ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
မှီခိုအတွက် nociceptin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအဓိကအားဖြင့်အီသနောနှင့်အတူအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မှီခိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ခုနှစ်နှစ်ဦးစလုံးအပြန်အလှန်အကြံပြုထားသည်။ Nociceptin လုပ်ကွက်နေရာအရပ် preference ကိုတိုင်းတာအလွဲသုံးစားမှုအများစုအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု (နောက်ဆက်တွဲဒေတာများကိုကြည့်ပါ) ။ Nociceptin CRF လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုးကာစိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ phenotype ရှိသည်ဖို့လူသိများ msP ကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့သွားသည်။ msP ကြွက်တစ်ဦး CRF ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူမှီခိုကြွက်ဆင်တူအီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားပြသနိုင်ဖို့, မြင့် Basal စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုရှိသည်ဖို့လူသိများကြသည်1 အဆိုပါ CRF တစ်မျိုးဗီဇ polymorphic သယ်ဆောင်ရန်ရန်နှင့်1 တိုးချဲ့ CRF အတွက်ရရှိလာတဲ့ကမကထ,1 အတော်ကြာဦးနှောက်ဒေသများတွင်သိပ်သည်းဆ (Hansson et al ။ , 2006) (ကြည့်ရှု ပုံ 9) ။ Nociceptin လည်းသိသိသာသာအီသနော၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement လျှော့ချ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ဤ antistress စနစ်များ (NPY, nociceptin) ၏နှစ်ဦးစလုံး၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာစူးစမ်းသင့်တယ်။
တစ်ဦးကသိသာအပြန်အလှန်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် CRF နှင့် norepinephrine စနစ်များအကြားတည်ရှိ။ အဆိုပါ pons နှင့် Basal forebrain ၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာ feed ကို-ရှေ့ဆက် system အဖြစ် Conceptualized, CRF norepinephrine မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း, အလှည့်အတွက် norepinephrine (CRF မြှင့်လုပ်ဆောင်Koob, 1999; ) နောက်ဆက်တွဲမှာ Data ကိုကြည့်ပါ။
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်ဤဆားကစ်၏ plasticity အတွက်အပြောင်းအလဲအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဘုံ neurocircuitry လုပ်ရပ်များ (အထကျကိုကြည့်ပါ) differential ယင်းဆားကစ်ကိုမောင်းဒါမှမဟုတ်ဆားကစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကနေရလဒ်ဖြစ်စေကြောင်းမော်လီကျူး neuroadaptations ပါဝင်လိမ့်မည်။ intracellular signal ကို transduction လမ်းကြောင်း၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းတွင် neuron function ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့် / သို့မဟုတ်နျူကလီးယား function ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်အထူးသဖြင့်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ကူးယူ၏ပြောင်းလဲနှုန်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမျိုးဗီဇ၏ပြောင်းလဲစကားရပ်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်ရှိရာအာရုံခံ၏ယူဆရရေရှည်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်မှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့အားအာရုံခံလည်ပတ်သည့်အတွက်အာရုံကြောဆားကစ်ပြောင်းလဲမှုများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်။ စွဲလမ်းအတွက်အများကြီးအလုပ် (opiods နှင့်ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CREB ၏ activation မှဦးဆောင်ကြောင်းပြသထားပါတယ်Shaw-Lutchman et al ။ , 2002; Edwards က et al ။ , 2007) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးထိုကဲ့သို့သော FosB, Fra-1, နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် Fra-2 အခြားကူးယူအချက်များ, ΔFosB၏ isoforms အဖြစ် Fos ပရိုတိန်းမိသားစုအဖွဲ့ဝင်များ၏လျင်မြန်သော (နာရီအတွင်း) activation စေနိုငျသျောလညျးရှိသညျ (အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအချိန်ကြာကြာကာလ (ရက်) ကျော်စုပြုံပြခဲ့Nestler, 2005) ။ activated ΔFosBနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရှိသည်ဟုနှင့်ΔFosB (စွဲလမ်းတစ်ပြည်နယ်အစပျိုးထိန်းသိမ်းနည်းကူညီပေးသည်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး "switch ကို" ဖြစ်နိုင်သည်McClung et al ။ , 2004) ။ (နှင့်မည်သို့မည်ပုံ) ထိုသို့သောကူးယူအချက်များထိုကဲ့သို့သော CRF နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ရှိသူများသည်အတိုင်း, ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏ function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်အာရုံအဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala နှင့်အတူဦးနှောက် arousal-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ, အထူးသဖြင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဆက်သွယ်မှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခုနစျပါးစနစ်များ (norepinephrine, orexin, NPY) ၏သုံးကျယ်ပြန့်ဦးနှောက်ထဲမှာပေမယ့်တိုးချဲ့ amygdala တစ်မိုးသည်းထန်စွာ innervation နှင့်အတူဖြန့်ဝေနေကြသည်။ အဆိုပါစနစ်များကို (CRF, vasopressin, nociceptin, dynorphin) ၏လေး forebrain တစ်လျှောက်လုံးဒါပေမယ့်လည်းတိုးချဲ့ amygdala (တစ်မိုးသည်းထန်စွာ innervation နှင့်အတူဒေသခံဆားကစ်ဖို့ပိုဒေသတွင်းများမှာပုံ 10) ။ သို့သော်တိုးချဲ့ amygdala ၏ဒေသတွင်ဤ neurotransmitter စနစ်များ၏ convergence (အလားအလာဟာ brainstem (norepinephrine) မှ deriving အာရုံခံခြင်းဖြင့်အစပျိုးစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြု hypothalamus (nociceptin, NPY), နှင့်တိုးချဲ့ amygdala သူ့ဟာသူအတွင်း CRF, vasopressin, nociceptin, dynorphin) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ insula ထံမှ afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် pedunculopontine နျူကလိယ (ရန် efferents ပို့ပေးပုံ 10) ။ သောဤ neurocircuitry ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်မည်သို့သူတို့ကဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ elucidated ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုလူသိများသည် stria terminalis (တိုးချဲ့ amygdala) ၏အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းအတွက်ဆဲလ်များနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယအများစု GABAergic ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကွဲပြား subpopulation enkephalin သို့မဟုတ် CRF ဖြစ်စေနှင့်အတူ colocalizes, ဒါပေမဲ့သူတို့ colocalize နီးပါးဘယ်တော့မှကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည် အတူတူအတူတူ GABAergic ဆဲလ်အပေါ် (နေ့ et al ။ , 1999) ။ သာ enkephalin မဟုတ်, CRF, colabeled အာရုံခံ discrete အာရုံကြောဆားကစ်အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala (အတွင်းတည်ရှိကြောင်းအကြံပြု, Interleukin-1βအားဖြင့် activated ခဲ့ကြသည်နေ့ et al ။ , 1999) ။ ထို့အပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် electrophysiological ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှု amygdala တုံ့ပြန်၏ဗဟိုနျူကလိယတွင်ဤ GABAergic အာရုံခံတိုးလာပစ်ခတ်ရန်နှင့်အတူ neurotransmitters-စိတ်ဖိစီးမှု arousal နှင့်အတူ neurotransmitters antistress တုံ့ပြန်ရန်ကြောင်းအကြံပြုပစ်ခတ်ရန်လျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှအခ်ါများမှာဤ GABAergic အာရုံခံ (အ efferent လမ်းကြောင်း၌အခြားသော GABAergic link ကိုတားစီးကြောင်း interneurons ဖြစ်နိုင်သည်နေ့ et al ။ , 1999; Davis က et al ။ , 1994).
အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala နှင့်ဦးနှောက် arousal-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များမှတဆင့်၎င်း၏ Afferent နှင့်ဗိုလ်မှူး Efferent Connections ကိုနှင့် Modulation
အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု convergence များအတွက် Focal Point သည်ရှည်လျားသောအခြေအနေများကြောက်ရွံ့နာကျင်မှုများအတွက်ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောသောအယူအဆ။ တစ်ဦးက cortex→နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala→အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ ဆားကစ် (ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျအရေးပါဖြစ်ပြထားပြီးPhelps နှင့် Le Doux, 2005) ။ တစ်ဦးကအေးစက် acoustic နှိုးဆွဟာ medial geniculate ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အာရုံအသင်းအဖွဲ့ cortex ၏ medial ဌာနခွဲအတွက်အာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့ဒေသများမှတစ်ဆင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နျူကလိယ activated ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala, အလှည့်၌, brainstem မှစီမံချက်များမှတဆင့်ကွောကျရှံ့သောတုံ့ပြန်မှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ဗဟို amygdala, (ရန်မှန်းချက်ရဲ့Phelps နှင့် Le Doux, 2005).
သိသိသာသာအထောက်အထားနာကျင်မှုမော်ဂျူနှင့်နာကျင်မှုမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် amygdala implicates ။ ကောင်းစွာ-လုပ်ငန်းများ၌ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်သွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိအပြင်, နာကျင်မှု-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ spinothalamic နှင့် spinohypothalamic နာကျင်မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးကနေတဆင့်ဒါပေမယ့်လည်း spino-parabrachial-amygdaloid နာကျင်မှုထဲကနေစီမံချက်များမှတဆင့်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် basolateral, နှင့် amygdala ၏ဗဟိုအရေးပါဖို့ပါးလျက်ရှိသည် လမ်းကြောင်း (အ parabrachial နျူကလိယနှင့်ထို့နောက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှကျောရိုးနှင့် trigeminal နျူကလိယ) (ဘားနှင့် Besson, 1990) ။ ဤအလမ်းကြောင်း၏နှစ်ဦးစလုံး (နာကျင်မှုများကိုထိခိုက်အတိုင်းအတာဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီNeugebauer et al ။ , 2004) ။ မြောက်မြားစွာမျဉ်းပြိုင် amygdala အထက်တွင်ဖော်ပြထားစွဲ၏စိတ်ခံစားမှု dysregulation ၏ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့် amygdala ကကမကထပြုခဲ့နာကျင်မှု၏စိတ်ခံစားမှုအစိတ်အပိုင်းအတွက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားမျဉ်းပြိုင် (စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်နာကျင်မှုများအကြားအပြန်အလှန်ပါဝင်သည်Neugebauer et al ။ , 2004နာကျင်မှုမှသည်းခံစိတ်အရေးကြီးတဲ့အကြား), ဆက်ဆံရေး (ဆလရီ et al ။ , 2001), နှင့်နာကျင်မှုများ glucocorticoid မော်ဂျူ (Greenwood-ဗန် Meerveld et al ။ , 2001) ။ ဘယ်လိုဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု neurotransmitters ကစားအထက်နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ပြထားအနာဂတ်သုတေသနအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
6 ။ စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်စွဲချိတ်ဆက်ခြင်းများအတွက် Conceptual မူဘောင်အဖြစ် Hedonic Homeostatic Dysregulation
6.1 ။ တစ်ဦးသင်တန်းနည်းပြအဖြစ် Hypothalamic-Pituitary-Adrenal ဝင်ရိုးတန်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း HPA ဝင်ရိုးထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးမှတဖန်မူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း, နှင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက်နှစ်ဦးစလုံး CRF နှင့် vasopressin သည်ဤတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်။ မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်ဆုတ်ခွာ၏သံသရာဆက်လက်အဖြစ်သို့သော်သည်, HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုသည်းခံစိတ်ကိုပြသပေမယ့် glucorticoids ၏မြင့်မားဖို့ဦးနှောက်၏ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့သည့် extrahypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထား (glucocorticoids အဆိုပါ amygdala အတွက် CRF သည့်စနစ် "sensitize" အဲဒီအကြံပြုImaki et al ။ , 1991; Makino et al ။ , 1994; Swanson နှင့် Simmons, 1989) ။ ထို့ကြောင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမတူဘဲ, (သို့မဟုတ်သာမန် homeostatic အခြေခံဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ပျက်ကွက်) တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးအောက်ပါအချိန်နှင့်အတူ dissipates သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအချိန်နှင့်အတူပိုမိုကြီးမားကြီးထွားလာစေခြင်းငှါ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးမှ, (လည်းအောက်ဖော်ပြပါ "Allostasis နှင့်စွဲလမ်းမှု" ကဏ္ဍကိုကြည့်ပါ) အနှုတ်အားဖြည့်ယန္တရားတက် setting ။ ထို့ကြောင့် HPA ဝင်ရိုးနှင့် glucocorticoids ကနဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဆုလာဘ်၏အသစ်အဆန်းများနှင့်ပံ့ပိုးရန်မြင့်မားသော Response ဆက်စပ်နေကြသည်ကိုလည်းအထူးသဖြင့်သူတို့ homeostasis ထံမှပြောင်းကုန်ပြီအထောက်အကူပြုဘယ်မှာတိုးချဲ့ amygdala စနစ်များအတွက် neuraxis များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် potentiating တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် pathophysiology ရန်။ ဤရလဒ်သည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ HPA အစိတ်အပိုင်း၏ activation စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်များနှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု neurochemical စနစ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှနိုငျသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။
6.2 ။ အကြား-စနစ် Neuroadaptations ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ် /
ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုအထက်သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းအကြား-system ကို neuroadaptations (စားပွဲတင် 1) ကဦးနှောက်ကို arousal-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတိုင်းဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတူတကွအုပ်စုဖွဲ့အဆိုပါ neurotransmitter စနစ်များကို Activation ပါဝင်မှတွေးဆနေကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် CRF စနစ်၏စုဆောင်းမှု (စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိတယ်လို့အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးများအတွက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပုံ 1B စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်အထက်), ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်အကြား-system ကို neuroadaptations အဆိုပါ dynorphin / κ opioid စနစ်, norepinephrine ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်, extrahypothalamic vasopressin စနစ်, နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် orexin စနစ်၏ activation ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို Activation စူးရှ abstinence နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်သာဒါပေမယ့်လည်းလူသားတွေအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားအားနည်းချက်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော NPY နှင့် nociceptin အဖြစ်ဦးနှောက် antistress စနစ်များ, ထို့အပြင် (အရှင် homeostasis restore ပြန်များအတွက်ယန္တရားဖယ်ရှားခြင်း, မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းလျော့မည်အကြောင်း,Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ ဤရလဒ်သည်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများဆက်လက်ရန်လှုံ့ဆော်မှု, ထိုကဲ့သို့သော dopamine, opioid peptides, serotonin, နှင့်ဂါဘမြို့သားအဖြစ်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားနှင့်ဆက်စပ် neurotransmitters ၏ function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုတို့ပါဝင်သည်သာမကကြောင်းအကြံပြု ဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များစုဆောင်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကို antistress စနစ်များ (၏နှောင့်အယှက်Koob နှင့် Le Moal, 2005).
ထိုအဦးနှောက် arousal-စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် antistress စနစ်များကိုပေါင်းစပ်အဆိုပါ neuroanatomical entity အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တိုးချဲ့ amygdala (compulsive မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမောင်းကိုစိတ်ဖိစီးမှုကထုတ်လုပ်ဆုလာဘ် function ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများများအတွက် neuroanatomical အလွှာကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါKoob နှင့် Le Moal, 2008()ပုံ 10) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ထိုကဲ့သို့သော amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (ထဲတွင် Conditions ကိုကွောကျရှံ့တုန့်ပြန်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များကိုပေါင်းစပ်အတွက်အခန်းကဏ္ဍPhelps နှင့် Le Doux, 2005) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ (Neugebauer et al ။ , 2004) (အထက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ အဆိုပါ arousal-စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်ဆက်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ကြွယ်ဝသောအလွှာမှစွဲ neurobiology မှကြောက်ရွံ့နာကျင်မှုအချက်များ၏အမူအကျင့်မှ neuroscience ထံမှအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှု (Pfaff, 2006) နှင့်စွဲလမ်းထဲမှာစိတ်ခံစားမှု dysregulation ၏ယန္တယားသို့ပေမယ့်လည်းစိတ်ခံစားမှုသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ယန္တယားသို့သာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပါသည်။
စွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များမောင်းထုတ်ကြောင်း antireward စနစ်များစုဆောင်းမှုထံမှရယူထားခြင်းကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များကိုဖြန်ဖြေအာရုံကြောဆားကစ်၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရေရှည်, မြဲ plasticity ပါဝင်မှတွေးဆသည်။ အဆိုပါ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် အထက်သတ်မှတ်ဇာတ်စင်ထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်ယားယံခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု, အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria, alexithymia, နှင့်သဘာဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏အရှုံးအဖြစ် key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Antireward ဦးနှောက်စနစ်များ (ဆုလာဘ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ရာအရပျ၌ရှိကြ၏သောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်Koob နှင့် Le Moal, 1997, 2005, 2008) ။ မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော CRF, norepinephrine, dynorphin, vasopressin နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် orexin အဖြစ်ဦးနှောက် antireward စနစ်များ (စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များထုတ်လုပ်ရန်စုဆောင်းခံရဖို့တွေးဆကြသည်Koob နှင့် Le Moal, 2001; Nestler, 2005; Aston-ဂျုံးစ် et al ။ , 1999()ပုံ 10) ။ ပစ္စုပ္ပန်စာတမ်းကိုလည်းယူဆရစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအိပ်ရေးဝြခင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော NPY နှင့် orexin အဖြစ် antistress စနစ်များ, ကိုလည်းအားလျော့စေခြင်းငှါစောဒကတက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဆုလာဘ် function ကိုအတွက်လျော့နည်းစေသည့် ventral striatum-တိုးချဲ့ amygdala များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ် (ပုံ 10) ။ ဆုလာဘ် neurotransmitter function ကို, antireward စနစ်များစုဆောင်းမှုနှင့်စိတ်မချရ antistress စနစ်များအတွက်လျှောက်လျော့နည်းများ၏ပေါင်းစပ် compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့်စွဲကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်တဲ့အင်အားကြီးအရင်းအမြစ်ပေးပါသည်။
6.3 ။ Relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ
ဒီထက် CRF နှင့် norepinephrine နှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်လွဲပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးပေမယ့်, ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များလည်းစွဲစူးရှဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရှည်လျားတာ compulsive မူးယစ်ဆေးမှပြန်လာဘယ်မှာနာတာရှည် relapse ၏မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အရေးပါသောပြဿနာအထောက်အကူပြုပေမည်။ အဆိုပါ အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: (တဏှာ) ဇာတ်စင်နှစ်ခုဖြစ်စဉ်များပါဝင်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်, ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence (အရက်လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီးလျှင်နှစ်ဦးစလုံး၏စူးရှသောဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရှည်လျားရှာသောဖိအားသို့မဟုတ်တိုးလာမူးယစ်ဆေးမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့် features အသစ်တွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်Valdez နှင့် Koob, 2004) ။ ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အတွက်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် CRF အသုံးပြုခြင်း, CRF ရှာကြံမူးယစ် (များအတွက်အခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ကျန်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်တွေးဆနေပါတယ်Valdez et al ။ , 2002; Valdez နှင့် Koob, 2004).
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြန်လည်သုံးသပ် (အားကောင်းတဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို်ပတ်သက်နေအတူတူပင်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်များကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များကကမကထပြုခဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကြည့်ရှု Shaham et al ။ , 2000, 2003) ။ စူးရှသောဖိအား relapse သွေးဆောင်သည့်အခါစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ခုနှစ်, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် CRF စနစ်များ (activated နေကြတယ်Shaham et al ။ , 2003) ။ CRF ရန်ကင်း, အရက်နှင့် opioid Self-အုပ်ချုပ်ရေး (၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့Erb et al ။ , 1998; လျူနှင့် Weiss, 2002; Shaham et al ။ , 1998; Zislis et al ။ , 2007) ။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement (လွတ်လပ်စွာ HPA ဝင်ရိုး၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် activation ၏ဖြစ်ပေါ်Erb et al ။ , 1998; le et al ။ , 2000; Shaham et al ။ , 1997) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်အခြားဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ norepinephrine, orexin, vasopressin နှင့် nociceptin (အထကျကိုကြည့်ပါ) တို့ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်စေခြင်းငှါ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင်နှင့် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် (ထို stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယသာရှိပြီးပြည်ပမှအဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ; အထက်ကြည့်ပါ) တိုးချဲ့ amygdala စိတ်ခံစားမှုစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေဖြင့်ဆိုသော်ငြားထိုစွဲသံသရာ၏စင်မြင့်, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ပါဝင်သော dysregulations အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကာလအတွင်းဆက်လက်ရှိ အဆိုပါ drug- ၏ activation က "တဏှာ" cue- နှင့်ယခု hypofunctioning မောင်းနှင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement neurocircuits နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပွနျလညျဖှဲ့စညျး, prefrontal စနစ် (မှအားနည်းချက်များအတွက်သေံတင်ထားရန် abstinenceVolkow နှင့်မုဆိုး, 2000).
6.4 ။ Allostasis နှင့်စွဲမှု
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးခြုံငုံအယူအဆရေးရာမူဘောင်မူးယစ်ဆေးမှီခိုတိရစ္ဆာန်၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ထိန်းညှိကြောင်း homeostatic ဦးနှောက်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူတစ်ချိုးကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတလဲလဲ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ထုတ်လုပ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် antistress စနစ်များထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏သဘောသဘာဝ homeostasis နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ချိုးကိုယ်စားပြုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏အမြင်စွဲ၏သော့ချက်ဒြပ်စင်နံပါတ်ရှင်းပြဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကဲ့သို့သောအခြားနာတာရှည်ဇီဝကမ္မမမှန်, အလားတူမူးယစ်ဆေးစွဲ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုဆိုးလာရင်, သိသာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဥပမာပြင်ပဖိအား) ကိုဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်, ပင်လအတွင်းလျင်မြန်စွာ "readdiction" ခွင့်ပြုမယ့်ကျန်နေတဲ့အာရုံကြောသဲလွန်စအရွက်များနှင့်အပြီးနှစ်ပေါင်း detoxification နှင့် abstinence ။ မူးယစ်ဆေးစွဲဤလက္ခဏာများချေါ, စိတျပိုငျးဆိုငျရာ function ကို၏ရိုးရှင်းစွာ homeostatic dysregulation ထက်ပိုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ, ဤစနစ်များ homeostasis အတူပြောင်းလဲနေသောချိုးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန်ဦးဆောင်ကြပါပြီ allostasis.
feed ကို-ရှေ့ဆက်ထက်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်, ယန္တရားများစေ့စပ်ခံရဖို့တွေးဆကြောင့် Allostasis ( "ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်တည်ငြိမ်ရေး" အဖြစ်သတ်မှတ်နှင့် homeostasis ထံမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်Sterling နှင့် Eyer, 1988) ။ အဆိုပါစနစ်များကို homeostasis ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းရန်လုံလောက်သောအချိန်မရှိဘူးလျှင်သို့သော်လျင်မြန်စွာအရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးဖို့နဲ့ feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားများသုံးစွဲဖို့တိကျစွာဒီစွမ်းရည်ကိုတစ်ဦး allostatic ပြည်နယ်စေပါတယ်။ တစ်ဦး allostatic ပြည်နယ် ယင်း၏သာမန် (homeostatic) လည်ပတ်မှုအဆင့်ကနေစည်းမျဉ်းစနစ်၏နာတာရှည်သှဖေတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ (homeostasis ဖို့မျှော်လင့်စိန်ခေါ်မှုများမှလျှင်မြန်စွာကိုတုံ့ပြန်ပေမယ် habituate နှေးနေကြသည်သို့မဟုတ်အလွယ်တကူတစ်ကြိမ်စေ့စပ်ပိတ်ထားကြဘူးKoob, 1999) ။ လုံလောက်သောအချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုတုန့်ပြန်ပိတ်ထားဖို့ကိုမရရှိနိုင်လျှင်ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလျင်မြန်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုခွင့်ပြုသောအလွန်ဇီဝကမ္မယန္တရားရောဂါဗေဒ၏အင်ဂျင်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ brainstem နှင့် Basal forebrain, အ hypothalamus အတွက် orexin နှင့် CRF အကြားအပြန်အလှန်နှင့် Basal forebrain အတွက် CRF နှင့် norepinephrine အကြားအပြန်အလှန်နှင့် CRF နှင့် vasopressin နှင့် / သို့မဟုတ် orexin အကြားအပြန်အလှန်နာတာရှည် dysregulated စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် (Koob, 1999) ။ အလားတူ allostatic ယန္တရားများ (စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုနှင့် antistress စနစ်များနှင့်အတူဆက်စပ်ရောဂါဗေဒကားမောင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့တွေးဆနိုင်ပါတယ်Koob နှင့် Le Moal, 2001) ။ (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဥပမာ) ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိန်ခေါ်မှုများတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်, မော်လီကျူးဆယ်လူလာနှင့် neurocircuitry အပြောင်းအလဲများကနေတစ်ဆင့်ဦးနှောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမူဘောင်များအတွက်ဤနေရာတွင်တံခါးခုံကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတခုချေါဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ကနေကျန်နေတဲ့သွေဖည်အသေးစိတ်ရှင်းလင်း allostatic ပြည်နယ်။ ဤသည်ပြည်နယ်မှဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ function ကို, အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးများနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-တုံ့ပြန်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ပံ့ပိုး, ဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်လိုက်လျော၏စုဆောင်းမှုလျော့နည်းသွားအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ neurobiological အပြောင်းအလဲကမီးလောင်ရာဆုလာဘ် set ကို point ရဲ့နာတာရှည်မြင့်ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ် ဦးနှောက် antistress စနစ်များကို။ ဤအသက်ရောက်မှုများအားလုံး (မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏ compulsive အထောက်အကူပြုKoob နှင့် Le Moal, 2008).
ဤလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသား Institute မှအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Institute မှကနျြးမာရေးရန်ပုံငွေအမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံနှင့်အရက်နှင့်စွဲလမ်းများအတွက် Pearson စင်တာမှဆီးချိုရောဂါနှင့် Digestive နှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေအမျိုးသား Institute မှခဲ့သည် သုတေသန။ စာရေးသူ (nociceptin ၏ neuroanatomical ဖြန့်ဖြူးအပေါ်သူ၏အလုပ်များအတွက်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူသူမ၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကူအညီအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှု, Janet Hightower ဒေါက်တာချားလ်စ် Neal နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကူအညီမိုက်ကယ် Arends နှင့် Mellany ဆန်းတို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်Neal et al ။ , 1999) နှင့်အတူမိမိအအကူအညီတောင်း ပုံ 9နှင့်ဒေါက်တာမိုက်ကယ်က Le Moal ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အယူအဆရေးရာမူဘောင်များအတွက်။ စာရေးသူလည်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်ဝေဖန်မှတ်ချက်များနှင့်ဆွေးနွေးမှုများများအတွက်အောက်ပါလူတွေကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်: ဒေါက်တာဟဲလ် Richardson ကဒေါက်တာဖြစ်သူ Scott Edwards ကဒေါက်တာဒေါင်ဂျီ, ဒေါက်တာ Kaushik Misra ဒေါက်တာလော်ရာ Orio ဒေါက်တာနစ်ခ် Gilpin, ဒေါက်တာ ။ Olivier ဂျော့ခ်ျဒေါက်တာ Marisa ရောဘတ်ဒေါက်တာ Sunmee Wee နှင့်ဒေါက်တာဗင်ျယာမိ Boutrel ။ ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှကနေထုတ်ဝေအရေအတွက်ကို 19397 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲမှာ Data မှာအွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် http://www.neuron.org/cgi/content/full/59/1/11/DC1/.
Adrian TE, Allen က JM, Bloom SR, Ghatei MA, Rossor MN, Roberts သည် GW, Crow အဘိဓါန်တီဂျေ, Tatemoto K ကို Polak JM ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Neuropeptide Y ကိုဖြန့်ဖြူး။ သဘာဝ။ 1983; 306: 584-586 ။ [PubMed]
Ahmed က SH, Walker က JR, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးတင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် persistent တိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 413-421 ။ [PubMed]
American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။4။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း; 1994 ။
T ကလီက X, Silberstein L ကို, အီဗန် CJ ရန် Anton B, Fein J ကို။ ကြွက်များ၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် ORL-1 ၏ Immunohistochemical localization ။ J ကို comp Neurol ။ 1996; 368: 229-251 ။ [PubMed]
Aston-ဂျုံးစ်, G, Delfs JM, Druhan J ကို, Zhu Y. အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ: opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် noradrenergic လုပ်ရပ်များများအတွက်ပစ်မှတ် site ကို။ ခုနှစ်တွင်: McGinty JF, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala ဖို့ Ventral Striatum ကနေတိုးတက်: Neuropsychiatry နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, vol 877 ။ ) နယူးယောက်: သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; 1999 ။ စစ။ 486-498 ။ [PubMed]
Badia-အသက်ကြီး NE, Stewart က RB, Powrozek က TA, ရွိုင်း KF, မာဖီ JM, Li က TK ။ Wistar, အရက်- သာ. နှစ်သက် (P) အတွက်ပါးစပ်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ် neuropeptide Y ကို (NPY) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် (NP) ကြွက် -nonpreferring ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2001; 25: 386-390 ။ [PubMed]
Badia-အသက်ကြီး NE, Stewart က RB, Powrozek က TA, မာဖီ JM, Li က TK ။ (လူကလေး) ကြွက်များမသောက် sucrose နှင့်အီသနောစားသုံးမှုပေါ်နှင့်မြင့်မားသောအရက်သောက် (သှားခဲ့တ) နှင့်အနိမ့်အရက်ထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ် neuropeptide Y ကိုသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003; 27: 894-899 ။ [PubMed]
Baldo BA ဘွဲ့, ဒံယေလ RA, Berridge CW, ကယ်လီ AE ။ orexin / hypocretin- နှင့် arousal, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဖိစီးမှုကိုဖြန်ဖြေကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine-β-hydroxylase immunoreactive အမျှင်များထပ်ဖြန့်ဝေ။ J ကို comp Neurol ။ 2003; 464: 220-237 ။ [PubMed]
Baldwin HA, Rassnick S က, Rivier J ကို, Koob gf, Britton KT ။ CRF ရန်ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာရန် "anxiogenic" တုန့်ပြန်နောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology (Berl) 1991; 103: 227-232 ။ [PubMed]
ဘေးလ် TL, ခြိုငျ့ WW ။ CRF နှင့် CRF receptors: စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အခြားအပြုအမူတွေအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 2004; 44: 525-557 ။ [PubMed]
Basso လေး, Spina M က, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်ရန်ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကင်းအောက်ပါမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္အတွက်ခုခံကာကွယ်မွှေးပါရာဒိုင်းရှိ "anxiogenic-ကဲ့သို့" အကျိုးသက်ရောက်မှု attenuates ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 145: 21-30 ။ [PubMed]
Beardsley pm တွင်, Howard JL, Shelton ဟာ KL, ကာရိုး FI ။ ကိုကင်း-ရှာကြံကင်း Prime နှင့်ကြွက်များအတွက်၎င်း၏လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှု vs footshock ဖိအားများကသွေးဆောင်၏ reinstatement အပေါ်ဝတ္ထု Kappa opioid အဲဒီ receptor ရန်, JDTic ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 183: 118-126 ။ [PubMed]
ဘားနတ် JF, Besson JM ။ အဆိုပါ spino (trigemino) pontoamygdaloid လမ်းကြောင်း: နာကျင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Neurophysiol ။ 1990; 63: 473-490 ။ [PubMed]
Blomeyer: D, Treutlein J ကို, Esser, G, Schmidt က MH, Schumann, G, CRHR1 ဗီဇနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များအကြား Laucht အမ် Interaction ဆယ်ကျော်သက်မိုးသည်းထန်စွာအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 146-151 ။ [PubMed]
Boutrel B, Kenny PJ, Specio SE, မာတင်-Fardon R ကို, Markou တစ်ဦးက, Koob gf, ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် hypocretin ဘို့က de Lecea အယ်လ်အခန်းက္ပ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2005; 102: 19168-19173 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Navarro အမ်မတိုင်မီကမျိုးစုံအီသနောထုတ်ယူစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်: CRF အားဖြင့်တားစီး1- နှင့် benzodiazepine-receptor ရန်နှင့် 5-HT1a-receptor agonist ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1662-1669 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bruijnzeel AW, ရွှေက MS ။ ဆေးခြောက်, နီကိုတင်းနှင့်အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ peptides ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2005; 49: 505-528 ။ [PubMed]
Bruijnzeel AW, Marcinkiewcz ကို C, ဣဇာက်က S, Booth ဟာ MM, ဒဲနစ် DM, ရွှေက MS ။ ကြွက်များတွင် fentanyl ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ် buprenorphine ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 931-941 ။ [PubMed]
Burchfield အက်စ်အဆိုပါစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု: အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်။ Psychosom Med ။ 1979; 41: 661-672 ။ [PubMed]
Caille S က, Espejo EF, Reneric JP, Cador M က, Koob gf, အ locus coeruleus ၏ noradrenergic အာရုံခံ၏ Stinus အယ်လ်စုစုပေါင်း neurochemical ကိုတွေ့ရှိရပါသည် naloxone-precipitated သို့မဟုတ်အလိုအလျောက် opiate ဆုတ်ခွာဖြစ်စေပြောင်းလဲပစ်မထားဘူးမျှမက opiate ဆုတ်ခွာ reverse မှ clonidine ၏စွမ်းရည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးထားဘူး ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999; 290: 881-892 ။ [PubMed]
Cappendijk SL, Hurd YL, Nylander ငါဗန် Ree JM, Terenius L. တစ်ဦးက heroin-, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကိုကင်း-မျှော် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ်ဦးစား endogenous ဦးနှောက် peptides ပွောငျးလဲဘူး။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1999; 365: 175-182 ။ [PubMed]
ဆလရီအီး, Laulin JP, Corcuff JB, က Le Moal က M, ထပ်ခါတလဲလဲဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်နှောင့်နှေး hyperalgesia ၏ Simonnet G. အတိုးတက်ရေးပါတီတိုးမြှင်: ထိခိုက်မခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 4074-4080 ။ [PubMed]
Chavkin ကို C, ယာကုပ်လျှင်, တိန်းအေ Dynorphin အဆိုပါκ opioid အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် endogenous ligand ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ။ 1982; 215: 413-415 ။ [PubMed]
Ciccocioppo R ကို, Panocka ငါ Polidori ကို C, Regoli: D, Massi အမ် Effect အရက်သေစာ- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်အရက်စားသုံးမှုအပေါ် nociceptin ၏။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 141: 220-224 ။ [PubMed]
Ciccocioppo R ကို, Economidou: D, fede တစ်ဦးက, Massi အမ်အဆိုပါ nociceptin / orphanin FQ / NOP အဲဒီ receptor စနစ်ကအရက်အလွဲသုံးစားမှုကုသမှုများအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်: အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်မကြာသေးမီကအလုပ်၏သုံးသပ်ချက်ကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 2003; 79: 121-128 ။ [PubMed]
Ciccocioppo R ကို, Economidou: D, fede တစ်ဦးက, Angeletti S က, Weiss က F, Heilig M က, အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင် antiopioid peptide nociceptin / orphanin FQ အားဖြင့်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူ၏ conditional reinstatement ၏ Massi အမ် attenuation ။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172: 170-178 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Clausen TR, Moller M က, Woldbye DP ။ မော်ဖင်းအကိုက်ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ် neuropeptide Y ကို၏ Inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လျှော့ချက c-fos စကားရပ်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ J ကို neuroscience Res ။ 2001; 64: 410-417 ။ [PubMed]
Contarino တစ်ဦးက, Papaleo အက်ဖ်အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor-1 လမ်းကြောင်း opiate ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များ mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2005; 102: 18649-18654 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Darland T က, Heinrich MM, ယူဆပါတယ် DK ။ Orphanin FQ / nociceptin: တစ်နာကျင်မှုနဲ့ analgesia အတွက်အခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်ဒါအများကြီးပို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1998; 21: 215-221 ။ [PubMed]
Daunais JB, ရောဘတ်, DC, McGinty JF ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက် striatum အတွက် preprodynorphin, ဒါပေမယ့်မရက c-fos, mRNA တိုးပွားစေပါသည်။ Neuroreport ။ 1993; 4: 543-546 ။ [PubMed]
Davis က M ကို, Rainnie D ကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ဆက်စပ်သောကြွက် amygdala အတွက် Cassell အမ် Neurotransmission ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1994; 17: 208-214 ။ [PubMed]
နေ့ HE, အ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ကြွက်အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွက် Curran EJ, Watson ဟာ SJ, Jr က Akil အိပ်ချ်ထူးခြားသော neurochemical လူဦးရေ: Interleukin-1β J ကို comp Neurol နေဖြင့်၎င်းတို့၏ရွေးချယ် activation အဘို့သက်သေသာဓက။ 1999; 413: 113-128 ။ [PubMed]
Vries GJ, Miller ကနေ MA က de ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ extrahypothalamic vasopressin စနစ်များခန္ဓာဗေဒနဲ့ function ကို။ ခုနှစ်တွင်: မြို့ပြ IJA, Burbach JPH, က de Wied: D, အယ်ဒီတာများ။ ; Elsevier: နယူးယောက်: ဦးနှောက် Vasopressin (ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှု, vol 119 စီးရီးခေါင်းစဉ်) တွင်တိုးတက်လာ 1998 ။ စစ။ 3-20 ။ [PubMed]
Delfs JM, Zhu Y ကို, Druhan JP, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Noradrenaline အဆိုပါ ventral forebrain အတွက် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဘို့အရေးကြီးသည်။ သဘာဝ။ 2000; 403: 430-434 ။ [PubMed]
D'Este L ကို, Casini တစ်ဦးက, Pontieri FE, Renda TG ။ ဘိန်းဖြူကုသမှုအောက်မှာကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ neuropeptide FF အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် NPY immunohistochemical ပုံစံများ။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1083: 151-158 ။ [PubMed]
Dumont EC, Williams က JT ။ Noradrenaline ဂါဘမြို့သားကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းA အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း stria terminalis အာရုံခံ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏တားစီး။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 8198-8204 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Economidou: D, fede တစ်ဦးကမာတင်-Fardon R ကို, Weiss က F, Massi M က, ဝတ္ထု nociceptin ၏ Ciccocioppo R. Effect / orphanin အရက်- သာ. နှစ်သက် msP ကြွက်များတွင်အီသနောအရက်သောက်အပေါ် FQ-NOP အဲဒီ receptor ligands ။ Peptides ။ 2006; 27: 3299-3306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Edwards က S နဲ့, ဂရေဟမ် DL, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW ။ နာတာရှည် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါကင်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Camp-မှီခိုပရိုတိန်း phosphorylation မှတိုင်းဒေသကြီး-တိကျတဲ့သည်းခံစိတ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 2201-2213 ။ [PubMed]
Egli RE, Kash TL, Choo K ကို Savchenko V ကို, Matthews က RT ကို, Blake RD, Winder DG ။ Norepinephrine အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် glutamatergic ဂီယာ modulates ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 657-668 ။ [PubMed]
Erb S က, Stewart ကဂျေကင်းရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ် corticotropin-releasing အချက်များ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အိပ်ရာပု stria terminalis ၏နျူကလိယ, ဒါပေမယ့်မ amygdala တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: RC35 ။ [PubMed]
Erb S က, Shaham Y ကို, Stewart ကဂျေကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းဖို့ stress- နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် relapse အတွက် corticotropin-releasing အချက်နှင့် corticosterone ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 5529-5536 ။ [PubMed]
Erb S က, Hitchcott PK, Rajabi H ကို, Mueller: D, Shaham Y ကို, Stewart ကဂျေα2 Adrenergic အဲဒီ receptor agonists ကင်းရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 23: 138-150 ။ [PubMed]
Erb S က, Salmaso N ကို, Rodaros: D, Stewart ကဂျေကြွက်များတွင်ရှာကြံကိုကင်းများ၏ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယဖို့ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှအ CRF ပါဝင်သောလမ်းကြောင်းတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 158: 360-365 ။ [PubMed]
Fahlke ကို C, Hard အီး, အီသနောစားသုံးမှု Hansen အက်စ်နည်းပြ corticosterone ၏ intracerebroventricular တာဟာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 1996; 127: 133-139 ။ [PubMed]
Fallon JH, Leslie FM ရေ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dynorphin နှင့် enkephalin peptides ၏ဖြန့်ဝေ။ J ကို comp Neurol ။ 1986; 249: 293-336 ။ [PubMed]
Forray MI, Bustos, G, Gysling K. Noradrenaline အဆိုပါ stria terminalis ၏ကြွက်အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာအချိုမှုလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: Vivo microdialysis လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ J ကို neuroscience Res ။ 1999; 55: 311-320 ။ [PubMed]
ဖူ Y ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, Brower VG, Sharp က BM ။ တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနီကိုတင်းရန်န့်အသတ် access ကိုစဉ်အတွင်းကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် Norepinephrine Secret ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 8979-8989 ။ [PubMed]
ဖူ Y ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, ကိန်း vB, Sharp က BM ။ နာတာရှည်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းကြွက်၏ amygdala အတွက် Norepinephrine လွှတ်ပေးရန်: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ Neuropharmacology ။ 2003; 45: 514-523 ။ [PubMed]
Fuentealba ဂျာ Forray MI, Gysling K. နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် stria terminalis ၏ကြွက်အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် norepinephrine ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ J ကို Neurochem ။ 2000; 75: 741-748 ။ [PubMed]
funk CK, Koob gf ။ တစ်ဦးက CRF2 အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့အုပ်ချုပ်ခွင့် agonist အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2007; 1155: 172-178 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
funk CK, O'Dell LE, ခရော EF, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း Corticotropin-releasing အချက်ဆုတ်ခွာ, အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်တိုးမြှင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 11324-11332 ။ [PubMed]
funk CK, Zorrilla EP, Lee က MJ, ဆန် KC, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက် 1 ရန်ရွေးချယ်အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 78-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gehlert DR, Cippitelli တစ်ဦးက, Thorsell တစ်ဦးက, က Le အေဒီ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Hamdouchi ကို C, Lu က J ကို, Hembre EJ, Cramer J ကို, သီချင်း M က, et al ။ 3- (4-Chloro-2-morpholin-4-yl-thiazol-5-yl) -8- (1-ethylpropyl) -2,6-dimethyl-imidazo [1,2-b] pyridazine: အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ထိရောက်မှုနဲ့ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor, ဦးနှောက်-ထိုးဖောက်မှုဝတ္ထုနှုတ်မရရှိနိုင် 1 ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2718-2726 ။ [PubMed]
ဂျော့ခ်ျအို Ghozland S က, Azar MR, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Parsons LH, O'Dell LE ရစ်ချတ်ဆင် HN, Koob gf ။ CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 17198-17203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gilpin ဘ, Stewart က RB, မာဖီ JM, Li က TK, Badia-အသက်ကြီး NE ။ Neuropeptide Y ကိုချမှတ်ထားအီသနော abstinence တဲ့ကာလအောက်ပါအရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်များတွင်ခံတွင်းအီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003; 27: 787-794 ။ [PubMed]
Gilpin ဘ, Misra K ကို Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် Neuropeptide Y ကိုအရက်သောက်သုံးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်းဖိနှိပ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 90: 475-480 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goeders NE ။ ကိုကင်းအားဖြည့်အတွက်တစ်ဦးက neuroendocrine အခန်းကဏ္ဍ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1997; 22: 237-259 ။ [PubMed]
Goeders NE ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုကင်းစွဲ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2002; 301: 785-789 ။ [PubMed]
ရွှေက MS, Pottash AL, Sweeney DR, ဒေးဗီးစ် RK, Kleber HD ကို။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှ opiate noradrenergic အပြန်အလှန်: Clonidine opiate ဆုတ်ခွာ-related စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းစေပါသည်။ Subst အရက်လုပ်ဆောင်ချက်များတလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 1980; 1: 239-246 ။ [PubMed]
Greenwood-ဗန် Meerveld B, Gibson က M, Gunter W က, Shepard J ကို, အလုပ်သမားများကြီးကြပ် R ကို, အ amygdala မှ corticosterone ၏ Myers ဃ Stereotaxic ပေးပို့ကြွက်များတွင်အူမကြီး sensitivity ကို modulates ။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 893: 135-142 ။ [PubMed]
Greenwell TN, Walker က BM, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Koob gf ။ အဆိုပါα1 adrenergic အဲဒီ receptor ရန် prazosin ဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2008 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gulya K သည်, Dave JR, ဟော့ဖ်မန်း PL ။ နာတာရှည်အီသနောကိုစားသုံးမိ mouse ကိုဦးနှောက်၏ hypothalamic နှင့် extrahypothalamic အရေးပါအတွက် vasopressin mRNA လျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 557: 129-135 ။ [PubMed]
Hansson AC အ, Cippitelli တစ်ဦးက, Sommer WH, fede တစ်ဦးက, Bjork K ကို Soverchia L ကို, Terasmaa တစ်ဦးက, Massi M က, Heilig M က, ကြွက် Crhr1 locus နှင့် sensitivity ကိုမှာ Ciccocioppo R. မူကွဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်ရှာကြံအရက်သေစာသို့ပြန်သွားကြသည်ရန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103: 15236-15241 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Beta ကို-adrenergic ရန် cocaine- နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စိုးရိမ်စိတ် attenuate ။ Psychopharmacology (Berl) 1993; 113: 131-136 ။ [PubMed]
Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အ arousal နှင့်ဆုလာဘ်: orexin function ကိုတစ်ဦး dichotomy ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006; 29: 571-577 ။ [PubMed]
Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2005; 437: 556-559 ။ [PubMed]
Hebb DO ။ အပြုအမူအဖွဲ့မြား: A Neuropsychological သီအိုရီ။ နယူးယောက်: Wiley; 1949 ။
စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် Heilig အမ်အဆိုပါ NPY စနစ်။ Neuropeptides ။ 2004; 38: 213-224 ။ [PubMed]
Heilig M က, Thorsell အေဦးနှောက် neuropeptide Y ကို (NPY) စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အရက်မှီခို၌တည်၏။ ဗြာ neuroscience ။ 2002; 13: 85-94 ။ [PubMed]
Heilig M က, Koob gf, Ekman R ကို, Britton KT ။ Corticotropin-releasing အချက်နှင့် neuropeptide Y ကို: စိတ်ခံစားမှုပေါင်းစည်းမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1994; 17: 80-85 ။ [PubMed]
Heimer L ကို, Alheid G. အ Basal forebrain ခန္ဓာဗေဒ၏ပဟေဠိအတူတကွ Piecing ။ ခုနှစ်တွင်: Napier TC, Kalivas PW, Hanin ငါအယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal Forebrain: ခန္ဓာဗေဒ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: စမ်းသပ်ဆေးပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနှင့်ဇီဝဗေဒ, vol 295) function ကိုမှနယူးယောက်မြို့: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1991 ။ စစ။ 1-42 ။ [PubMed]
အဆိုပါ amygdala အတွက် Heinrich SC, Menzaghi က F, Schulteis, G, Koob gf, corticotropin-releasing အချက်၏ Stinus အယ်လ်နှိမ်နင်းရေးမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuates ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1995; 6: 74-80 ။ [PubMed]
Hennessy JW, Levine အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု, arousal, နှင့် pituitary-adrenal system ကို: တစ် psychoendocrine ယူဆချက်။ ခုနှစ်တွင်: Sprague JM, Epstein AN, အယ်ဒီတာများ။ Psychobiology နှင့်ဇီဝစိတ်ပညာတိုးတက်မှု။ 8 ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1979 ။ စစ။ 133-178 ။
Himmelsbach CK ။ အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်မူးယစ်ဆေးစွဲများ၏စပ်လျဉ်းအပေါ်လေ့လာရေး: အအေးမိ pressor စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1941; 73: 91-98 ။
Holter သည် SM, Henniger က MS, Lipkowski AW, Spanagel R. Kappa-opioid receptors နှင့်ရေရှည်အီသနော-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များတွင် relapse ကဲ့သို့သောက်သုံးရေ။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 153: 93-102 ။ [PubMed]
Huber: D, Veinante P ကို, ကျိုးပဲ့လျက် R. Vasopressin နှင့် oxytocin ဗဟို amygdala အတွက်ကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေ excite ။ သိပ္ပံ။ 2005; 308: 245-248 ။ [PubMed]
Imaki T က, Nahan JL, Rivier ကို C, Sawchenko PE, glucocorticoids နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် corticotropin-releasing အချက် mRNA ၏ခြိုငျ့ဒဗလျူ Differential စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 1991; 11: 585-599 ။ [PubMed]
Isoardi NA, Bertotto ME, Martijena ID ကို, Molina VA သို့, Carrer HF ။ သက်သာစေသောဆေး-ညှို့မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းအောက်ပါကြွက် basolateral amygdala အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တားစီးမရှိခြင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 26: 1036-1044 ။ [PubMed]
Kash TL, Winder DG ။ Neuropeptide Y နှင့် corticotropin-releasing အချက် bi-directionally အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် inhibitory Synaptic ဂီယာ modulate ။ Neuropharmacology ။ 2006; 51: 1013-1022 ။ [PubMed]
Khachaturian H ကို, Lewis က ME, Schafer MKH, Watson ဟာ SJ ။ အဆိုပါ CNS opioid စနစ်များခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1985; 8: 111-119 ။
Kitamura အို Wee က S, Specio SE, Koob gf, ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Pulvirenti အယ်လ်စက်လှေကား: တစ်ထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကို။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 186: 48-53 ။ [PubMed]
Knapp DJ သမား, Overstreet DH, Moy အက်စ်အက်စ်, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ SB242084, flumazenil နှင့်ကြွက်များတွင် CRA1000 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်။ အရက်။ 2004; 32: 101-111 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်, norepinephrine နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 46: 1167-1180 ။ [PubMed]
Koob gf ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ Allostatic အမြင်: psychopathology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Bevins RA, Bardo MT, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ Etiology အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ, vol 50) လင်ကွန်း NE: Nebraska စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; 2004 ။ စစ။ 1-18 ။
Koob gf, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ။ 1988; 242: 715-723 ။ [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 52-58 ။ [PubMed]
Koob gf, ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ 'မှောင်မိုက်ဘက်' '၏သည် Le Moal အမ်ပလပ်စတစ်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1442-1444 ။ [PubMed]
Koob gf, စွဲမှု၏က Le Moal အမ် Neurobiology ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2006 ။
Koob gf, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 1149-1159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008; 59: 29-53 ။ [PubMed]
Kovacs KM, Szakall ငါ O 'Brien: D, ဝမ် R ကို, Vinod KY, Saito က M, Simonin က F, Kieffer BL, Vadasz C. κ-opioid အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်များတွင်အရက်၏ပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့သွားသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005; 29: 730-738 ။ [PubMed]
Kreek MJ, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် dysregulation ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998; 51: 23-47 ။ [PubMed]
Kuzmin တစ်ဦးက, Sandin J ကို, Terenius L ကို, Ogren SO ။ သိမ်းယူမှု, စကားရပ်များနှင့်ကြွက်များတွင်အီသနော-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ reinstatement: opioid အဲဒီ receptor-တူသော 1 အဲဒီ receptor agonists နှင့် naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2003; 304: 310-318 ။ [PubMed]
Kuzmin တစ်ဦးက, Kreek MJ, Bakalkin, G, Liljequist အက်စ်အဆိုပါ nociceptin / orphanin FQ အဲဒီ receptor agonist Ro 64-6198 အရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် relapse ကဲ့သို့အရက်သောက်သုံးကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 902-910 ။ [PubMed]
မြေယာ BB, Bruchas MR, Lemos JC, Xu M က, Melief EJ, Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု၏ dysphoric အစိတ်အပိုင်း dynorphin Kappa-opioid စနစ်၏ activation အားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 407-414 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
le အေဒီမာက S, Juzytsch W က, Watchus J ကို, Shalev ဦး, Shaham Y. ကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက် corticotrophin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 150: 317-324 ။ [PubMed]
le အေဒီမာက S, Juzytsch W က, ဖလက်ချာ PJ, Shaham Y. အရက်သေစာမှ relapse အတွက်ပျမ်းမျှ raphe နျူကလိယအတွက် corticotropin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 7844-7849 ။ [PubMed]
le အေဒီမာက S, Juzytsch W က, Funk: D, ကြွက်များတွင်အရက်ရှာခြင်းနှင့်အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် alpha-2 adrenoceptors ၏ Shaham Y. အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 179: 366-373 ။ [PubMed]
Lee က B, Tiefenbacher S က, Platt DM, Spealman RD ။ α၏ Pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း2-adrenoceptors ရှဉ့်မျောက်များအတွက်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement ဖြစ်ပေါ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 686-693 ။ [PubMed]
Leri က F, Flores J ကို, Rodaros: D, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သော်လည်း stria terminalis ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယသို့ noradrenergic ရန်၏ပြုတ်ရည်များကမပေးကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ၏ Stewart ကဂျေပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 5713-5718 ။ [PubMed]
Lewis ကငွေကျပ်လီကို C, Perrin MH, Blount တစ်ဦးက, Kunitake K ကို Donaldson ကို C, Vaughan J ကို, Reyes TM, Gulyas J ကို, Fischer W က, et al ။ urocortin III ၏ identification, အ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ကို CRF2 အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူမိသားစုတစ်ခုအပိုဆောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 7570-7575 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လျူက X, အီသနောရှာ၏ reinstatement အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို Weiss အက်ဖ် Additional အကျိုးသက်ရောက်မှု: corticotropin-releasing အချက်နှင့် opioid ယန္တရားများ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation ၏မှီခိုနှင့်အခန်းကဏ္ဍ၏သမိုင်းအားဖြင့် exacerbation ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 7856-7861 ။ [PubMed]
lu, L, လျူ: D, Ceng X တို့မှာ Corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 ကြွက်များတွင်ကင်း-conditioning ရာအရပျ preference ကိုမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse mediates ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2001; 415: 203-208 ။ [PubMed]
lu, L, Shepard JD, ခန်းမ FS, ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအား၏ Shaham Y. Effect opiate နှင့် psychostimulant အားဖြည့်အပေါ်, ကြွက်များတွင် reinstatement နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003; 27: 457-491 ။ [PubMed]
Makino S က, ရွှေ PW, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ parvocellular ဒေသတွင်း၌ corticotropin-releasing ဟော်မုန်း mRNA အပေါ် Schulkin ဂျေ Corticosterone ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 640: 105-112 ။ [PubMed]
မာတင်-Fardon R ကို, Ciccocioppo R ကို, Massi M က, Weiss အက်ဖ် Nociceptin ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် ethanol- သော်လည်းမကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကာကွယ်ပေးသည်။ Neuroreport ။ 2000; 11: 1939-1943 ။ [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ ΔFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 132: 146-154 ။ [PubMed]
McLaughlin JP, Marton-Popovici M က, Chavkin C. Opioid အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းκနှင့်မျိုးဗီဇပြတ်တောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု prodynorphin ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 5674-5683 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Merlo-Pich အီး, Lorang M က, Yeganeh M က, Rodriguez က de Fonseca က F, Raber J ကို, Koob gf, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကနိုးကြွက်များ၏ amygdala အတွက် extracellular corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆင့်ဆင့်၏ Weiss အက်ဖ်တိုးတက်တိုင်းတာအဖြစ် microdialysis ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 5439-5447 ။ [PubMed]
Meunier JC, Mollereau ကို C, ခွန်ကောက် L ကို, Suaudeau ကို C, et al Moisand ကို C, Alvinerie P ကို, Butour JL, Guillemot JC, Ferrara P ကို, Monsarrat B က။ opioid အဲဒီ receptor-တူသော ORL1 အဲဒီ receptor ၏ endogenous agonist ၏အထီးကျန်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ သဘာဝ။ 1995; 377: 532-535 ။ [PubMed]
Mollereau ကို C, Parmentier M က, Mailleux P ကို, Butour JL, Moisand ကို C, Chalon P ကို, Caput: D, Vassart, G, Meunier JC ။ ORL1, အ opioid အဲဒီ receptor မိသားစုတစ်ခုဝတ္ထုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ ကိုယ်ပွား, အလုပ်လုပ်တဲ့စကားရပ်နှင့်ဒေသခံ။ FEBS လက်တ။ 1994; 341: 33-38 ။ [PubMed]
Nambu T က, Sakurai T က, Mizukami K ကို Hosoya က Y, Yanagisawa က M, သက်ကြီးကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံ orexin ၏ Goto K. ဖြန့်ဖြူး။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 827: 243-260 ။ [PubMed]
နာရီတာ M က, Nagumo Y ကို, Hashimoto က S, နာရီတာ M က, Khotib J ကို, Miyatake M က, Sakurai T က, Yanagisawa က M, Nakamachi T က, Shioda S ကို mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်သွေးဆောင်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အတွက် orexinergic စနစ်များဆူဇူကီးတီတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု မော်ဖင်းအကိုက်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 398-405 ။ [PubMed]
Neal CR, Jr က Mansour တစ်ဦးက, Reinscheid R ကို, Nothacker HP က, Civelli အို Watson ဟာ SJ ။ , orphanin FQ ၏ Jr Localization ကြွက်များ၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် (nociceptin) peptide နှင့်တမန် RNA ။ J ကို comp Neurol ။ 1999; 406: 503-547 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
Neugebauer V ကိုလီ W က, ငှက် GC, ဟန် JS ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ဇွဲနာကျင်မှု။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2004; 10: 221-234 ။ [PubMed]
Nie Z ကို, Schweitzer P ကို, Roberts သည် AJ, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနော CRF1 receptors ကနေတဆင့်ဗဟို amygdala အတွက် GABAergic ဂီယာကိုကြီးထွားများပြားစေ။ သိပ္ပံ။ 2004; 303: 1512-1514 ။ [PubMed]
O'Dell LE, Koob gf ။ သွေးကြောသွင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း 23 နာရီ access ကိုအတူကြွက်များတွင် '' နီကိုတင်းဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု '' ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007; 86: 346-353 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
O'Dell LE, Roberts သည် AJ, Smith က RT ကို, Koob gf ။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်ငွေ့ထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအပြီးအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး Enhanced ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004; 28: 1676-1682 ။ [PubMed]
သံလွင် MF, Koenig HN, Nannini MA, Hodge CW ။ နောက်ဆက်တွဲအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်လျော့ချရေးစဉ်အတွင်း stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် extracellular CRF အဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002; 72: 213-220 ။ [PubMed]
Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ CRF နှင့် CRF ခြင်းဖြင့်မျိုးစုံအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ Modulation1 receptors ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004; 77: 405-413 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အရက်မှမျိုးဗီဇတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအချက်ပြနှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး SC, Zhang က H ကို, ရွိုင်းတစ်ဦးက, amygdaloid စခန်း-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းအတွက် Xu တီလိုငွေပြမှု။ J ကို Clin Invest ။ 2005; 115: 2762-2773 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
က Parker RM, ကြွက်ဦးနှောက်အတွက် Y-receptor မျိုးကွဲ mRNAs ၏ Herzog အိပ်ချ်ဒေသတွင်းဖြန့်ဖြူး။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 1431-1448 ။ [PubMed]
Peyron ကို C, Tighe DK, ဗန်တွင်း Pol AN, က de Lecea L ကို, Heller HC, Sutcliffe JG, Kilduff TS ။ မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကို်အာရုံခံ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 9996-10015 ။ [PubMed]
Pfaff ဃဦးနှောက် arousal နှင့်သတင်းအချက်အလက်သီအိုရီ: ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်မျိုးဗီဇယန္တရားများ။ ကင်းဘရစ်, MA: Harvard University Press မှ, 2006 ။
Pfeiffer တစ်ဦးက, Brantl V ကို, Herz တစ်ဦးက, Emrich HM ။ Psychotomimesis κ opiate receptors ကကမကထပြုခဲ့။ သိပ္ပံ။ 1986; 233: 774-776 ။ [PubMed]
Phelps EA ၏, သည် Le Doux je ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့ amygdala ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်လူ့အပြုအမူဖြစ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 175-187 ။ [PubMed]
Piazza PV, Deroche V ကို, Deminière JM, Maccari S က, က Le Moal က M, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အဆင့်ဆင့်၏အကွာအဝေးဆိုင်မွန်အိပ်ချ် Corticosterone ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ပိုင်ဆိုင်: အာရုံ-ရှာကြံအပြုအမူတွေများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1993; 90: 11738-11742 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Piazza PV, Le Moal အမ် Glucocorticoids ဆုလာဘ်တစ်ခုဇီဝအလွှာအဖြစ်: ဇီဝကမ္မနှင့် pathophysiological ဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1997; 25: 359-372 ။ [PubMed]
Primeaux SD, Wilson က SP, အသွင်ဆောင်လာကြောင်း GA, York မြို့ DA, Wilson ကနေ MA ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် neuropeptide Y ကို၏ Overexpression "စိုးရိမ်" ကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2006; 30: 791-801 ။ [PubMed]
Rainnie DG, Bergeron R ကို, Sajdyk တီဂျေ, Patil က M, Gehlert DR, Shekhar အေ Corticotrophin အဆိုပါ amygdala အတွက်အချက်-သွေးဆောင် Synaptic plasticity လွှတ်စိတ်ခံစားမှုမမှန်သို့စိတ်ဖိစီးမှုဘာသာပြန်ပေးသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 3471-3479 ။ [PubMed]
Rasmussen DD, နိုငျငံ BM, Bryant, CA, Mitton DR, Larsen လုပ် SA, Wilkinson CW ။ နာတာရှည်နေ့စဉ်အီသနောနှင့်ဆုတ်ခွာ: 1 ။ အဆိုပါ hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကို။ အရက် Clin Exp Res ။ 2000; 24: 1836-1849 ။ [PubMed]
Rassnick S က, Heinrich SC, Britton KT, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ corticotropin-releasing အချက်ရန်၏ Microinjection အီသနောဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနောက်ကြောင်းပြန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 605: 25-32 ။ [PubMed]
ကြိမ် AK, Koo KL, Tejwani GA, Bhargava HN ။ discrete ဦးနှောက်ဒေသများ, ကျောရိုး, pituitary gland နှင့်ကြွက်များ၏အရံတစ်ရှူးအတွက် immunoreactive dynorphin (1-13) အဆင့်ဆင့်အပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်မှီခိုနှင့် abstinence ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 584: 207-212 ။ [PubMed]
Reinscheid RK, Nothacker HP က, Bourson တစ်ဦးက, Ardati တစ်ဦးက, Henningsen RA, Bunzow JR, ယူဆပါတယ် DK, Langen H ကို, Monsma FJ, Jr က Civelli O. Orphanin FQ: တစ်ခု opioidlike, G ပရိုတိန်း-coupled receptor မြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ neuropeptide ။ သိပ္ပံ။ 1995; 270: 792-794 ။ [PubMed]
Reyes TM, Lewis ကငွေကျပ်, Perrin MH, Kunitake KS, Vaughan J ကို, Aria, CA, Hogenesch JB, Gulyas J ကို, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ WW, Sawchenko PE ။ Urocortin II ကို: ရွေးချယ်အမျိုးအစား2CRF receptors အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်သော corticotropin-releasing အချက် (CRF) neuropeptide မိသားစုဝင်တစ်ဦးကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 2843-2848 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရစ်ချတ်ဆန် HN, Zhao နှင့် Y ကို, Fekete EM, Funk CK, Wirsching P ကို, Janda KD, Zorrilla EP, Koob gf ။ MPZP: တစ်ဝတ္ထုသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး corticotropin-releasing အချက်အမျိုးအစား 1 အဲဒီ receptor (CRF1) ရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 88: 497-510 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရစ်ချတာ RM, ကြွက် amygdala အတွက် Vivo CRF လွှတ်ပေးရန်ခုနှစ်တွင် Weiss အက်ဖ် Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုးလာနေပါတယ်။ synapses ။ 1999; 32: 254-261 ။ [PubMed]
Rimondini R ကို, Arlinde ကို C, Sommer W က, မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် Heilig အမ် Long-တည်တံ့တိုးနှင့်အရက်ဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ FASEB ဂျေ 2002; 16: 27-35 ။ [PubMed]
Rimondini R ကို, Thorsell တစ်ဦးက, အ neuropeptide Y ကို (NPY) Y2 အဲဒီ receptor ရန် BIIE0246 အားဖြင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး Heilig အမ်နှိမ်နင်းရေး: မှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ာင်းသက်သေအထောက်အထား။ neuroscience လက်တ။ 2005; 375: 129-133 ။ [PubMed]
Robbins TW, Everitt BJ ။ arousal စနစ်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Gazzaniga က MS, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါသိမှု neuroscience ။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1995 ။ စစ။ 703-720 ။
ရောဘတ်က M, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ Nociceptin / orphanin FQ presynaptically အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ရာအီသနော-သွေးဆောင်တိုး GABAergic ဂီယာနှင့်လုပ်ကွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103: 9715-9720 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Tallent MK, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနောကြွက်အလယ်ပိုင်း amygdala အာရုံခံအတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ဦးစလုံးမှာ GABAergic ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2003; 100: 2053-2058 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Stouffer DG, Parsons LH, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနော-မှီခိုကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10159-10166 ။ [PubMed]
ရောဘတ် AJ, Heyser CJ, Cole ကို M က, Griffin P ကို, Koob gf ။ မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါအလွန်အကျွံအီသနောအရက်သောက်: allostasis ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 581-594 ။ [PubMed]
Rodriguez က de Fonseca က F, Carrera မြ, Navarro M က, Koob gf, cannabinoid ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း limbic စနစ် corticotropin-releasing အချက်၏ Weiss အက်ဖ် Activation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 276: 2050-2054 ။ [PubMed]
Rohrer DK, Kobilka ကယ်။ adrenergic receptor မျိုးရိုးဗီဇထုတ်ဖော် Vivo ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်ထံမှ Insights ။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 1998; 38: 351-373 ။ [PubMed]
Romach MK, ရောင်းအား EM ။ အဆိုပါအရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ၏စီမံခန့်ခွဲမှု။ Annu ဗြာ Med ။ 1991; 42: 323-340 ။ [PubMed]
ရွိုင်းတစ်ဦးကနှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး SC ။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့ပြီးနောက်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကကြွက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ neuropeptide Y ကိုပရိုတိန်း၏လျော့နည်းသွားဆယ်လူလာစကားရပ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2002; 26: 796-803 ။ [PubMed]
Rudoy, ​​CA, ဗန် Bockstaele EJ ။ Betaxolol, တစ်ဦးရွေးချယ် beta ကို (1) -adrenergic အဲဒီ receptor ရန်, ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကနေအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းစဉ်အတွင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူမှေးမှိန်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1119-1129 ။ [PubMed]
စိတ်ဖိစီးမှု-activated အလယ်ပိုင်း CRF အာရုံခံအပေါ်ဗဟို orexins ၏ဖြစ်နိုင်သောပါဝင်ပတ်သက်မှု: Sakamoto က F, Yamada က S, Ueta Y. ဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin-တစ်ဦးကအဆိုပါ hypothalamic paraventricular နျူကလိယနှင့်ကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdaloid နျူကလိယအတွက် corticotropin-releasing အချက်ပါဝင်သောအာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2004; 118: 183-191 ။ [PubMed]
Sakoori K သည်, မာဖီ NP ။ (FQ orphanin) Endogenous nociceptin စိတ်ကြွဆေးနှင့်အီသနောမှ Basal hedonic ပြည်နယ်နှင့်စူးရှသောဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ပေမယ့်နာတာရှည်တုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 877-891 ။ [PubMed]
Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, Tanaka H ကို, et al Williams က SC, ရစ်ချတ်ဆန်ဂျာ Kozlowski မိသားစုဆရာဝန်, Wilson က S နဲ့။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell ။ 1998; 92: 573-585 ။ [PubMed]
Sarnyai Z ကို, Biro အီး, Gardi J ကို, Vecsernyes M က, Julesz J ကို, Telegdy G. အဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက်ကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် "စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော" အပြုအမူ mediates ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 675: 89-97 ။ [PubMed]
Schulkin J ကို, McEwen BS, ရွှေ PW ။ Allostasis, amygdala နှင့် anticipatory angst ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1994; 18: 385-396 ။ [PubMed]
Schulteis, G, Stinus L ကို, Risbrough vB, Koob gf ။ Clonidine လုပ်ကွက်ဝယ်ယူပေမယ့်ကြွက်များတွင် conditional opiate ဆုတ်ခွာမစကားရပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 1998; 19: 406-416 ။ [PubMed]
Selye အိပ်ချ်ကွဲပြားခြားနား nocuous အေးဂျင့်များကထုတ်လုပ်တစ်ဦးက syndrome ရောဂါ။ သဘာဝ။ 1936; 138: 32 ။
Semba J ကို, Wakuta M က Maeda ဟာဂျေ, Suhara တီနီကိုတင်းဆုတ်ခွာကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ subsensitivity induces: ရပ်နားခြင်းဆေးလိပ်စဉ်အတွင်းစိတ်ကျဝေဒနာ၏မိုးရွာသွန်းမှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2004; 29: 215-226 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Funk: D, Erb S ကိုဘရောင်းကတီဂျေ, Walker က CD ကို, Stewart ကဂျေ Corticotropin-releasing အချက်, ဒါပေမယ့် corticosterone, ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ-ရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်မဟုတ်။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 2605-2614 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Erb S က, Leung က S, Buczek Y ကို, Stewart ကဂျေက CP-154,526, အ corticotropin-releasing factor1 အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးရွေးချယ် non-peptide ရန်ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ-လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ရန်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse attenuates ။ Psychopharmacology (Berl) 1998; 137: 184-190 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Erb S က, ကြွက်များတွင်ရှာကြံဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းဖို့ Stewart ကဂျေစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 2000; 33: 13-33 ။ [PubMed]
Shaham Y ကို, Shalev ဦး, Lu က L ကို, De ကျေး H ကို, Stewart ကဂျေမူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်: သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 168: 3-20 ။ [PubMed]
Shalev ဦး, နစ် PS, Quinn T က, Tobin က S, Wahi P. ကြွက်များတွင်ရှာကြံဘိန်းဖြူ၏စူးရှသောအစာအာဟာရ-ဆင်းရဲချို့တဲ့-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်တစ်ဦးက corticotropin-releasing အချက်အဘို့အခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်မရ corticosterone ။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 187: 376-384 ။ [PubMed]
Sharp က BM, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ။ ထိုး-မှီခိုနှင့် desensitization: လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယကနေနီကိုတင်း-သွေးဆောင် norepinephrine Secret ၏အတွင်း Vivo microdialysis အားဖြင့် detection ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1993; 133: 11-19 ။ [PubMed]
Shaw-Lutchman tz, Barrot M က, Wallace T က, Gilden L ကို, Zachary V ကို, Impey S က, Duman RS, မုန်တိုင်း: D, Nestler EJ ။ naltrex-one-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-mediated ကူးယူ၏ဒေသတွင်းနှင့်ဆယ်လူလာမြေပုံ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3663-3672 ။ [PubMed]
Shepard JD, Barron KW, Myers DA ။ အဆိုပါ amygdala မှ Corticosterone ပေးပို့ဗဟို amygdaloid နျူကလိယနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက် corticotropin-releasing အချက် mRNA တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 861: 288-295 ။ [PubMed]
Shippenberg TS, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မကြာမီကတိုးတက်လာ။ ခုနှစ်တွင်: Davis က KL, Charney: D, ကွိုင်း JT, Nemeroff ကို C, အယ်ဒီတာများ။ Neuropsychopharmacology: တိုးတက်မှု၏ပဉ္စမမျိုးဆက်။ Philadelphia တွင်: Lippincott ဝီလျံနဲ့ Wilkins; 2002 ။ စစ။ 1381-1397 ။
Shippenberg TS, Zapata တစ်ဦးက, Chefer VI ကို။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ pathophysiology ။ Pharmacol Ther ။ 2007; 116: 306-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shoblock JR, Wichmann J ကို, Maidment NT ။ ဝယ်ယူ, စကားရပ်, မျိုးသုဉ်းခြင်း, မော်ဖင်းအကိုက် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ reinstatement အပေါ်စနစ်တစ်ခုတက်ကြွ ORL-1 agonist, Ro 64-6198 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropharmacology ။ 2005; 49: 439-446 ။ [PubMed]
ရှောလမုန်သည် RL, Corbit JD ။ လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ: 1 ။ ၏ယာယီဒိုင်းနမစ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychol ဗျာ 1974; 81: 119-145 ။ [PubMed]
Sommer WH, Rimondini R ကို, Hansson AC အ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Gehlert DR, ဘား CS, Heilig MA ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု၏ Upregulation, စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့် sensitivity ကိုများနှင့်မှီခိုများ၏သမိုင်းအောက်ပါ crhr1 စကားရပ် amygdala ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 139-145 ။ [PubMed]
သီချင်း ZH, Takemori AE ။ စသည်တို့အတွက် mouse ကိုကျောရိုးကြိုးကနေ immunoreactive dynorphin တစ်ဦး၏လွှတ်ပေးရေး corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် stimulation ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1992; 222: 27-32 ။ [PubMed]
Spangler R ကို, Unterwald EM, Kreek MJ ။ "Bing" ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက် caudate-putamen အတွက် prodynorphin mRNA တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးဖြစ်ပေါ်သည်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 1993; 19: 323-327 ။ [PubMed]
Sparber SB, Meyer DR ။ Clonidine မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင် conditional အပြုအမူနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု naloxone-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု antagonizes ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1978; 9: 319-325 ။ [PubMed]
Sparta DR, ကြေး JR, ဟေးယက် DM, Knapp DJ သမား, MacNeil DJ သမား, သီရဲလ် TE ။ တစ်ဦးရွေးချယ် neuropeptide Y ကို Y1 အဲဒီ receptor ရန်၏ Peripheral နှင့်ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှု C57BL / 6J ကြွက်တို့ကအီသနောစားသုံးမှုဖိနှိပ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004; 28: 1324-1330 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Specio SE, Wee က S, O'Dell LE, Boutrel B, Zorrilla EP, Koob gf ။ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuate ။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 196: 473-482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sterling P ကို, Eyer ဂျေ Allostasis: arousal ရောဂါဗေဒရှင်းပြဖို့အသစ်တစ်ခုပါရာဒိုင်း။ Fisher က S နဲ့, အကြောင်းရင်း J ကို, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဘဝကစိတ်ဖိစီးမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ကျန်းမာရေး၏လက်စွဲစာအုပ်။ Chichiester: ယော Wiley; 1988 ။ စစ။ 629-649 ။
Stinus L ကို, Cador M က, Zorrilla EP, Koob gf ။ Buprenorphine နှင့် CRF1 ရန်ကြွက်များတွင် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏ဝယ်ယူပိတ်ဆို့။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 90-98 ။ [PubMed]
Sutcliffe JG, က de Lecea အယ်လ်အဆိုပါ hypocretins: အ arousal တံခါးခုံ setting ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 339-349 ။ [PubMed]
ဆူဇူကီး R ကို, Lumeng L ကို, McBride WJ လီ TK, Hwang BH ။ အရက် preference ကိုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်၎င်း၏အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှု: (: P) ကြွက်များပိုနှစ်သက်အရက်၏ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းလျှော့ချ neuropeptide Y ကို mRNA စကားရပ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2004; 1014: 251-254 ။ [PubMed]
Swanson LW, Simmons DM ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ CRH ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ peptide mRNA အဆင့်ဆင့်အပေါ် differential Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းနှင့်အာရုံကြောလွှမ်းမိုးမှု: ကြွက်တစ် Hybrid histochemical လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1989; 285: 413-435 ။ [PubMed]
Swanson LW, Sawchenko PE, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ဒဗလျူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ ovine corticotropin-releasing အချက် immunoreactive ဆဲလ်များနှင့်အမျှင်များ၏အဖွဲ့အစည်းက: တစ်ခု immunohistochemical လေ့လာမှု။ Neuroendocrinology ။ 1983; 36: 165-186 ။ [PubMed]
သီရဲလ် TE, Koh သည် MT, Pedrazzini တီမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သုံးစွဲမှုဟာ neuropeptide Y ကို Y1 အဲဒီ receptor မှတဆင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: RC208 ။ [PubMed]
သီရဲလ် TE, Naveilhan P ကို, NPY Y ကိုအားဖြင့်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ရေသောက် Ernfors P. အကဲဖြတ်2 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်။ Peptides ။ 2004; 25: 975-983 ။ [PubMed]
Thorsell တစ်ဦးက, Rimondini R ကိုအလယ်ပိုင်း neuropeptide ၏ Heilig အမ်ပိတ်ဆို့ Y ကို (NPY) Y2 receptors ကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ neuroscience လက်တ။ 2002; 332: 1-4 ။ [PubMed]
Thorsell တစ်ဦးက, Slawecki CJ, Ehlers CL ။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: neuropeptide Y နှင့် Wistar ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ် corticotropin-releasing အချက်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2005; 161: 133-140 ။ [PubMed]
Thorsell တစ်ဦးက, Rapunte-Canonigo V ကို, O'Dell L ကို, ချန်လုပ် SA ဘုရင်တစ်ဦးက, Lekic: D, Koob gf, Sanna PP ။ viral vector-သွေးဆောင် NPY amygdala Over-စကားရပ် Wistar ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲခြို့ငဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးချဲ့အရက်သေစာစားသုံးမှုနောက်ကြောင်းပြန်။ ဦးနှောက်။ 2007; 130: 1330-1337 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအတွက် noradrenergic ယန္တရားများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ် Trzaskowska အီး, Kostowski ဒဗလျူနောက်ထပ်လေ့လာမှုများ။ Pol J ကို Pharmacol Pharm ။ 1983; 35: 351-358 ။ [PubMed]
Tucci S က, Cheeta S က, ရှေ P ကို, အရှေ့တောင် File ။ အချက်ရန်, α-helical CRF လွှတ် Corticotropin9-41, နီကိုတင်း-သွေးဆောင်ခြွင်းချက်မရှိ, စိုးရိမ်ပူပန်အေးစက်ပေမယ့်မပေးနောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 167: 251-256 ။ [PubMed]
Turchan J ကို, Lason W က, Budziszewska B, mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် prodynorphin, proenkephalin နှင့် dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်တစ်ခုတည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး Przewlocka ခအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropeptides ။ 1997; 31: 24-28 ။ [PubMed]
Turnbull AV စနစ်, Rivier C. Corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ endocrine တုံ့ပြန်မှု: CRF receptors, စည်းနှောင်ပရိုတိန်းနှင့်ဆက်စပ် peptides ။ proc Soc Exp Biol Med ။ 1997; 215: 1-10 ။ [PubMed]
Unterwald EM, Rubenfeld JM, Kreek MJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး Kappa နှင့် mu, ဒါပေမယ့်မပေးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်, opioid receptors upregulates ။ Neuroreport ။ 1994; 5: 1613-1616 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Koob gf ။ Allostasis နှင့် corticotropin-releasing အချက်နှင့် neuropeptide Y ကိုစနစ်များ dysregulation: အရက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004; 79: 671-689 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Roberts သည် AJ, ချမ်း K သည်, Davis က H ကို, နန်က M, Zorrilla EP, Koob gf ။ စူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးလာ: corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့်စည်းမျဉ်း။ အရက် Clin Exp Res ။ 2002; 26: 1494-1501 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Zorrilla EP, Roberts သည် AJ, Koob gf ။ corticotropin-releasing အချက်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအီသနော abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တိုးမြှင့်တုန့်ပြန် attenuates ။ အရက်။ 2003; 29: 55-60 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Sabino V ကို, Koob gf ။ corticotropin-releasing အချက်-2 အဲဒီ receptor activation ကနေတဆင့်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်: မှီခိုကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004; 28: 865-872 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Platt DM, Rowlett JK, Rüedi-Bettschen: D, Spealman RD ။ opioid နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related ယန္တရားများများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ရှဉ့်မျောက်များအတွက်ရှာကြံကင်း၏ Agonist-သွေးဆောင် reinstatement κ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007; 323: 525-533 ။ [PubMed]
Veinante P ကို, Freund-Mercier MJ ။ တစ်ဦး histoautoradiographic လေ့လာမှု: ကြွက်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် oxytocin- နှင့် vasopressin-binding က်ဘ်ဆိုက်များ၏ဖြန့်ဝေ။ J ကို comp Neurol ။ 1997; 383: 305-325 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
Walker က BM, Koob gf ။ အီသနောမှီခိုအတွက်κ-opioid စနစ်များတစ်စိတ်ခွန်အားနိုးအခန်းကဏ္ဍများအတွက် Pharmacological သက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 643-652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Walker က BM, Rasmussen DD, Raskind MA, Koob gf ။ α1အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက် -Noradrenergic အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလုပ်ကွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုး။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008; 42: 91-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ် X ကို, CEN X ကို, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာလူးအယ်လ် Noradrenaline ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်-conditioning ရာအရပျ preference ကို၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reactivity ဘို့အရေးကြီးသည်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2001; 432: 153-161 ။ [PubMed]
ဝမ် J ကို, ဖန်မေး, footshock-စိတ်ဖိစီးမှု-သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မူးယစ် priming-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ်ဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏လျူ Z ကို, Lu ကအယ်လ်ဒေသကြီး-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 185: 19-28 ။ [PubMed]
ဝမ် B က, သင် ZB, ဆန် KC, ပညာရှိ RA ။ ကိုကင်းရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: အ CRF များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (2) အဲဒီ receptor နှင့်ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ CRF-binding ပရိုတိန်း။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 193: 283-294 ။ [PubMed]
က Watanabe ကို T, Nakagawa T က, Yamamoto R ကို Maeda ဟာတစ်ဦး, Minami က M, ကြွက်များတွင် naloxone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း noradrenergic စနစ်၏ Satoh အမ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 170: 80-88 ။ [PubMed]
Watson ဟာ SJ, Khachaturian H ကို, Akil H ကို, Coy DH, ဦးနှောက်ထဲမှာ dynorphin စနစ်များနှင့် enkephalin စနစ်များ၏ဖြန့်ဖြူး၏တိန်းအေနှိုင်းယှဉ်။ သိပ္ပံ။ 1982; 218: 1134-1136 ။ [PubMed]
Wee က S, Mandyam CD ကို, Lekic DM, Koob gf ။ α1အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် -Noradrenergic system ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2008; 18: 303-311 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weiss က F, Ciccocioppo R ကို, Parsons LH, Katner S ကိုလျူက X, Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ဘင်-ရက်ရှာဟာအို Angeletti S က, ရစ်ချတာ RR ။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse ။ Neuroadaptation, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အေးစက်အချက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Quinones-Jenab V ကို, အယ်ဒီတာ။ နယူးယောက်: ကင်းစွဲ (သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, vol 937 စီးရီးခေါင်းစဉ်ကို): များ၏ဇီဝအခြေခံသိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; 2001 ။ စစ။ 1-26 ။ [PubMed]
Winsky-Sommerer R ကို, Yamanaka တစ်ဦးက, Diano S က, Borok အီး, Roberts သည် AJ, Sakurai T က, Kilduff TS, Horvath TL, အ corticotropin-releasing အချက်စနစ်နှင့် hypocretins (orexins) အကြားက de Lecea အယ်လ် Interaction: စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေတဲ့ဝတ္ထု circuit ကို ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 11439-11448 ။ [PubMed]
Woldbye DP, Klemp K ကို Madsen TM အလိုအလျောက်။ Neuropeptide Y ကို Y5 ကဲ့သို့ receptors မှတဆင့် naloxone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ attenuates ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1998; 284: 633-636 ။ [PubMed]
Woldbye DP, Ulrichsen J ကို, Haugbol S က, Bolwig TG ။ ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာ neuropeptide Y. အရက်အရက်၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် attenuated ဖြစ်ပါတယ်။ 2002; 37: 318-321 ။ [PubMed]
ရှီ ZX, Fuller လုပ် SA, Stein EA ၏။ ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန် Kappa opioid receptors အားဖြင့် modulated သည်တစ်ဦး Vivo အတွက် အစာရှောင်ခြင်း-သိသိ voltammetry လေ့လာမှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1998; 284: 151-161 ။ [PubMed]
zhou Y ကို, Leri က F, တတ်, E, Hoeschele M က, Kreek MJ ။ ဘိန်းဖြူရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဘိန်းဖြူအတွက်မိုင်နိုအက်စစ် vasopressin နဲ့ V1b အဲဒီ receptor ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်၎င်း, ဘိန်းဖြူများက precipitated ရှာကြံ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 226-236 ။ [PubMed]
Zislis, G, Desai ကတီဗီ, Prado M က, Shah က HP က, Bruijnzeel AW ။ အဆိုပါ CRF အဲဒီ receptor ရန် D-ဖီ CRF ၏ဆိုးကျိုးများ(12-41) နှင့်ကြွက်များအတွက်နီကိုတင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ်α2-adrenergic အဲဒီ receptor agonist clonidine ။ Neuropharmacology ။ 2007; 53: 958-966 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]